Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Istanbul - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Istanbul (Turki: Istanbul) waa magaalo taariikh, dhaqan iyo qurux qurux badan leh. Loogu yeedhay Byzantium waagii hore, magaca magaalada ayaa loo beddelay Constantinople sanadkii 324 CE markii ay dib u dhiseen Boqortooyadii ugu horaysay ee Masiixiyiinta Roomaanka, Constantine. Magaca "Istambul", kaas oo - laga yaabee inuu layaableh - wuxuu ka yimid Griig waxaana loo turjumi karaa musuqmaasuq "magaalada". In kasta oo ereygan uu ahaa mid si ballaadhan loo isticmaali jiray qarniyo, wuxuu kaliya noqday magaca rasmiga ah ee magaalada markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga 1920-meeyadii.
Magaalada ugu dadka badan Yurub, Istanbul waxay sameysaa xarunta dhaqaalaha ee Turkiga waxayna si kalsooni leh u xadeysaa xuduudaha u dhexeeya Aasiya iyo Yurub sidii ay ahayd millenniyo: tani waa natiijada markaad isku darsato Masiixiyiintii hore, magaalo weyn oo casri ah iyo Bariga Dhexe casriga ah. Waxay ku taal labada dhinac ee Bosphorus, Istanbul waxay ku haysaa magaaladeeda weyn: dadka ku nool magaalada ayaa ka badan 14 milyan oo qof, taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn adduunka.
Lagu amaanay waqtiyadii hore sida "Rome labaad", tani waa magaalo aad runtii u baahan tahay wareejin - dhaqanka iyo raynraynta ayaa ku hareeraysan gees walba oo in kabadan 2000 oo sano oo taariikh ah ayaa ku sugeysa.
Nidaamka degmooyinka iyo dowladaha hoose ee Istambul waa mid aad u casriyeysan oo waxaa la beddelay 2009. Halkan waxaa ah qayb ka mid fudud oo magaalada loogu qaybiyey gobollo qiyaas ah:
Sultanahmet / Fatih (Magaaladii Hore)
Muhiimad ahaan Constantinople ee Roman, Byzantine, iyo in badan oo ka mid ah xilligii Cusmaaniyiinta, tani waa magaalada derbiga ku wareegsan, oo leh inta badan meelaha caanka ah ee taariikhiga ah ee Istanbul.
Waxaa la dejiyaa meelo badan oo ka mid ah goobaha cawayska ee magaalada, degmadan oo ay ku jiraan Galata, Wadada Istiklal, Iyo Fagaaraha Taksim sidoo kale waxay leedahay qayb u gaar ah oo muuqaal iyo hoy ah.
Degmada ganacsiga ugu weyn ee magaalada, sidoo kale waxaa ku yaal suuqyo badan oo casri ah, iyo degmooyin sida Elmadağ, Nişantaşı, Levent, Iyo Etiler.
Bangiga Yurub ee Bosphorus oo ay ku yaalliin qasriyo faro badan, jardiinooyin, guryo hogag-biyood leh, iyo xaafadaha bohemian.
Horyaal Dahab ah
Bangiyada 'Golden Horn', oo ah marinka u kala qaybiya dhinaca Yurub degmooyin gaar ah. Eyup leh jawi Cusmaaniyiin ayaa halkan ku yaal.
Baxsasho aad u fiican oo ka socota magaalada, oo ka kooban jasiirado ka kooban sagaal jasiiradood oo baabuur-la-aan - oo qaarkood ay yar yihiin, qaarna waaweyn yihiin - oo leh guryo alwaax qurux badan leh, kaymo geedo cagaaran iyo aragtiyo wanaagsan - jasiiradaha, iyo sidoo kale waddada halkaas.
Qeybta Bariga ee Istanbul, oo leh xaafado qurux badan oo ku yaal xeebta Marmara iyo Bosphorus.
Banaanka reer galbeedka
Qeybta reer galbeedka ee dhinaca Yurub.
In kasta oo waxyaabihii hore ee degitaanka bini-aadamka laga helay godka Yarımburgaz agagaarka harada Kçkçekmece iyo inta lagu gudajiro dhismaha saldhig tareenada dhulka hoostiisa mara ee Yenikapı, gumeystayaashii Giriigga ahaa ee reer Megara, oo uu hogaaminayay hogaamiyahoodii halyeeyga ahaa Byzas, ayaa dhaqan ahaan loo aqbalay inay yihiin aasaasayaashii Istanbul. Ballaadhinta gumaysigii hore ee Griiga ee Byzantium amarka Imbaraadoorkii Roomaanka ee Constantine kii weynaa, magaalada boqortooyada Constantinople wuxuu ahaa ku dhawaad ​​kun sano caasimaddii aadka loo adkeeyay ee Roomaankii Bari (oo markii dambe loogu yeeri jiray Byzantine) Boqortooyadii. Ilaa maantadan, Wadaadka Ecumenical, oo ah madaxa Kaniisadda Orthodox ee Bariga wuxuu sii ahaanayaa Archbishop of Constantinople, oo wali ku sugan Istanbul. Waxaa ugu dambayntii qabsaday Boqortooyadii Cusmaaniyiinta Mehmed II 29 -kii May 1453 -kii, dhacdo mararka qaar loo adeegsado in lagu xuso dhammaadkii qarniyadii dhexe. Waxay ahayd Xarunta dareemayaasha ee ololeyaal milatari oo ahaa inay si weyn u ballaariso Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Bartamihii 1500-meeyadii, Istanbul, oo ay ku noolyihiin ku dhawaad ​​nus malyuun, waxay ahayd xarun dhaqan, siyaasadeed iyo ganacsi oo weyn. Xukunkii Cusmaaniyiintu wuu socday ilaa laga adkaaday dagaalkii koowaad ee aduunka Istanbulna ay qabsadeen xulafadii. Markii Jamhuuriyadda Turkigu dhalatay 1923 ka dib Dagaalkii Xorriyadda, Kemal Atatürk wuxuu caasimadiisii ​​u wareejiyay magaalada Ankara, oo istiraatiiji ahaan ku taal Xarunta Jamhuuriyadda cusub. Si kastaba ha ahaatee, Istanbul waxay sii waday inay si aad ah u ballaariso; maanta dadkeedu waa qiyaastii 14 milyan waxayna ku kordhaan qiyaastii 400,000 oo muhaajiriin ah sanadkiiba. Warshaduhu way ballaadheen xataa markii dalxiisku koray. Waxay sii ahaanaysaa magaalo abuurta taariikhdeeda isgoyska halkaas oo labada qaaradood ku kulmaan.
Istambuul waxaa loo qeybiyaa seddex waqooyi-koonfur Bosphorus Strait (Bosphorus Strait, “Marinka Istanbul”), khadka kala qaybiya Yurub iyo Aasiya, marinka biyaha ee Horyaal Dahab ah (estuary) kala qaybinta qaybta galbeed iyo Badda Marmara (Marmara Denizi) sameynta xuduud koonfur. Aragtida badankood waxay ku urursan yihiin magaaladii hore jasiiraddii Blue, galbeedka Bosphorus ee u dhexeeya Geeska iyo Badda. Geeska oo dhan ilaa woqooyi waa Galata, Beyoglu iyo Risaalo, qalbiga Istanbul casriga ah, halka Kadikoy waa degmada ugu weyn dhinaca isbarbardhiga yar ee Anatolia ee magaalada. Badda Madow waxay sameysaa soohdinta woqooyi ee Istanbul oo aad u yar.
Waxay noqon kartaa daruuro, roob, ama xitaa baraf Istanbul
Istambuul waxay leedahay cimilo dhex dhexaad ah oo badweynta ah oo ay saameyn ku yeelato cimilo qaaradeed, oo leh kuleyl iyo kuleyl xagaaga iyo qabow, qoyan iyo mararka qaarkood baraf qabow.
Istanbul waxay leedahay celcelis ahaan roob celcelis ahaan sarreeya oo gaaraya 844 mm (taas oo ka badan tan London, Dublin ama Brussels, oo sumcaddooda taban ee Istanbul aaney soo gaarin), iyadoo xilliga dayrta iyo jiilaalka ay yihiin kuwa ugu roobka badan, iyo dabayaaqada guga iyo xagaaga oo ah kuwa ugu qalalan. In kasta oo guga iyo xagaaga dabayaaqadiisu ay yara qallalan yihiin marka la barbar dhigo xilliyada kale, roobabku waa kuwo muhiim ah xilliyadaas, mana jiro xilli qalalan oo ka dhasha arrintaas.
Haddii ay jirto sumcad xun oo Istanbul ay ku dhacdo, waa qoyaan sanadeedka sarreeya, gaar ahaan xilliga qaboobaha iyo xagaaga oo ay weheliso qabow dabayl ah iyo saameyn la taaban karo oo jasiirad ah xilli kasta.
Xagaagu guud ahaan waa kulul yahay celcelis ahaan qiyaastii 27 ° C maalintii iyo 18 ° C habeenkii. Heerarka qoyaan badan ee qaraabada iyo 'saamaynta-jasiiradda la taaban karo' ayaa kaliya wax ka sii daraysa. Filo heerkulka ilaa 35 ° C maalmaha ugu kulul sanadka. Xagaagu sidoo kale waa xilliga ugu qalalan, laakiin si aan badnayn buu u da'aa. Roobabku waxay soconayaan 15-30 daqiiqadood iyadoo qorraxdu had iyo jeer soo muuqato isla maalintaas. Daadadka deg degga ah waa dhacdo caadi ah ka dib roobab culus (gaar ahaan xilliga kuleylaha), taas oo ay ugu wacan tahay muuqaalka buuraha magaalada iyo nidaamyada bullaacadaha oo aan ku filnayn.
Jiilaalku waa qabow oo qoyan, celcelis ahaan 2 ° C habeenkii iyo 7 ° C maalintii. In kasta oo ay dhif tahay in maalinta la qaboojiyo, haddana heerarka qoyaanka oo sarreeya iyo qabowga dabayshu waxay ka dhigeysaa inay dareento qabow daran oo aad u xun.
Daadadka barafka, oo dhaca ku dhowaad sanadkiiba, waa wax caadi ah inta u dhexeysa bilaha Diseembar iyo Maarso, oo leh wadar guud oo baraf sanadle ah oo ku dhowaad saddex toddobaad ah, laakiin celcelis ahaan barafka jiilaalka ayaa si aad ah u kala duwan sannadba sannadka ka dambeeya, barafka barafku wuxuu had iyo jeer joogaa oo keliya dhawr maalmood ka dib baraf kasta, xitaa xaaladaha barafka daran.
Guga dabayaaqadiisa (dabayaaqadii May ilaa horraantii Juun) iyo horraantii dayrta (dabayaaqadii Sebtember ilaa horraantii Oktoobar) waa kuwo aad u wacan sidaa darteedna waa waqtiyada ugu wanaagsan ee magaalada la booqdo. Inta lagu jiro xilliyadan qabow iyo kuleyl midna ma aha, oo haddana waa mid qorax leh, in kastoo habeennadu qabow noqon karaan, roobkuna caadi yahay.
Soo-booqdayaasha dallad ayaa lagula talinayaa xilliga gu'ga, deyrta iyo jiilaalka, iyo xilliga kuleylaha si looga fogaado qorraxda iyo mararka qaarkood roobka. Si kastaba ha noqotee, ma aha mushkilad sidan u weyn, maadaama waddooyinka Istanbul ay si lama filaan ah u buuxiyeen dalladleyda iibiya isla marka ay roob da’aan. In kasta oo dalladaha ay bixiyaan ay yihiin wax yar oo iib ah, heerka socodka waa 5 TL dalladkiiba (in kastoo aad ka heli karto dalladaha aadka uga wanaagsan qiimahaas dukaamada haddii aad xoogaa fiiriso).
Dharka khafiifka ah ayaa lagula taliyaa inta lagu jiro xagaaga iyo jaakad khafiif ah iyo / ama funaanad fudud haddii fiidkii xagaaga ay noqdaan kuwo qabow, dharka diiran ayaa lagama maarmaan ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha iyo isku dar ah labada xilliga guga iyo deyrta.
Cabirkeeda weyn darteed, muuqaalka dhulka iyo saameynta badda, Istanbul waxay soo bandhigeysaa microclimates badan oo kala duwan. Marka, qaybaha kala duwan ee Istanbul waxay la kulmi karaan xaalado cimilo oo kala duwan isla waqtigaas. Tusaale ahaan, isla waqtigaas, waxaa si xoog leh uga da'aya magaalada Sarıyer ee woqooyiga, si tartiib tartiib ah ayuu roob uga da'ayaa magaalada Levent ee degmada ganacsiga, halka Taksim oo koonfurta ka sii xigta ay maalin cadceeddu si buuxda u socoto.
Kaarka Matxafka ee Istanbul
Matxaf aad u anfacaya oo u oggolaanaya marin u helidda meelo badan oo muhiim ah oo ku yaal Sultanahmet. Kaar shaqeynaya 5 maalmood (120 saacadood) ka dib isticmaalka ugu horreeya, iyo Qiimaha 185 TL (Feb 2019). (Tigidhada gooni u ah Hagia Sophia, Topkapı Palace, iyo Harem waxay ku kacaysaa 155 TL kaligeed.) Waxaa laga iibsan karaa irridda madxaf kasta oo hoos ku taxan ama khadka tooska ah.
Kaarka aan la wareejin karin wuxuu u oggolaanayaa hal gelitaan bilaash ah mid kasta oo ka mid ah matxafyadan:
Topkapı Palace iyo Harem
Matxafyada Qadiimiga ah ee Istanbul
Matxafka Mosaic Istanbul
Madxaf loogu talagalay Taariikhda Sayniska iyo Teknolojiyada ee Islaamka
Matxafka Turkiga iyo Farshaxanka Islaamka
Matxafka Guriga ee Galata Mevlevi
Matxafka Rumeli Hisar
Marka lagu daro lacag uruurinta markaad booqaneyso bogagan, kaarka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka boodo safka tigidhada isla markaana aad si toos ah ugu aaddid albaabada dhamaan goobaha.
Matxafyada ku yaal Istanbul badankood waa xiran Isniinta ama Arbacada, markaa hubinta degelka marka hore ama garaaciddu waa ikhtiyaar macquul ah kahor intaadan dhaqaaqin.
Haddii kale, waxaad tixgelin kartaa inaad iibsato wax aad qaali u ah Wadada Dalxiiska ee Istanbul, Baasaboorka 2-maalin waa € 95, 3-maalin pass € 115, 7-maalin pass € 145 (Feb 2019). Waxaa ku jira gelitaanka dhammaan matxafyada kor ku xusan, dhowr safar oo doonyo ah, kaarka SIM, qaadista garoonka diyaaradaha Ataturk. Si kastaba ha noqotee, waxay si isdaba-joog ah u heshaa dib-u-eegisyo xun sababtoo ah abaabul xumo iyo dhibaatooyin goos goos ah oo ku saabsan helitaanka qaar ka mid ah adeegyadeeda ay ku jiraan.
Inta badan duulimaadyada caalamiga ah ayaa adeegsada Gegada diyaaradaha ee Istanbul Atat Atrk (), 20 km galbeed ka xigta Xarunta Magaalada ie dhinaca Yurub. Waa saldhigga Turkish Airlines, iyada oo duulimaadyo toos ah ku tagta inta badan magaalooyinka Yurub iyo isku xirnaan badan Bariga Dhexe, Bariga Fog, Afrika iyo Waqooyiga Ameerika. Waxa kale oo jira duulimaadyo gudaha ah oo ku baahsan Turkiga (tusaale saacad kasta oo taga Ankara). Faahfaahinta tas -hiilaadka iyo ikhtiyaarada gaadiidka fiiri maqaalka ugu weyn ee garoonka diyaaradaha Atatürk ee Istanbul. Marka la soo koobo, gaadiidka loo qaadayo ama looga tagayo magaalada waa xulasho metro, bas ama taksi. Gegidan diyaaraduhu way xirmi doonaan Abriil 2019 - in kasta oo taariikhdaas saddex jeer oo hore dib loo dhigay.
Laga bilaabo 6 Abriil 2019 dhammaan duulimaadyada ayaa isticmaali doona Madaarka Cusub ee Istanbul (), 20 km dhanka woqooyi ka xiga Arnavutköy. Gegidan diyaaraduhu waxay furmeen 29 Oktoobar 2018 iyadoo duulimaadyada Turkish Airlines ay si joogto ah u ballaaranayaan. Laga soo bilaabo Maarso 2019 kuwani waxay u duulaan gudaha (G gate) Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, Hatay, Izmir, Kayseri iyo Trabzon, iyo caalamkaba (irdaha kale) ilaa Ashgabad, Baku, Bishkek, Chennai, Dhaka DAC, Dubai, Ercan, Frankfurt, Kuwait, London Gatwick, Moscow VKO, Munich, Navoiy, New York & Toronto iyagoo sii maraya Shannon, Paris CDG iyo Tbilisi. Duulimaadyadan waxay kabayaan adeegyada TK ee magaalooyinkaas (iyo dhammaan duulimaadyada hawlwadeennada kale) ee ka imanaya garoonka diyaaradaha Atatürk illaa iyo inta ay dhammaanayso wareejinta garoonka. Koodhka IATA ee “IST” Atatürk Airport ka dib ayaa dib loogu wareejin doonaa garoonka cusub. Tareenka dhulka hoostiisa mara iyo tareenka xawaaraha sare leh ayaa la qorsheeyay in la kordhiyo si ay u gaaraan garoonka cusub sanadka 2020, dhanka kale isku xirka ayaa ah bas. Kuwani waxay ka socdaan dhowr xarumood oo gaadiidka magaalada ah oo ay ku jiraan Sirkeci (50 km) iyo Kadıköy (65 km), iyadoo qiimahoodu yahay 20-30 TL. Waxa kale oo jira bas xamuul oo u dhexeeya garoomada diyaaradaha ee hore iyo kuwa cusub. Goobta Arnavutköy ee garoonka diyaaradaha waa waddo aad u fog oo ka jirta degmada magaalada oo isku magac ah. Dhammaan miisaska kirada baabuurta waxay ku yaalliin aagga Imaatinka ee xarunta guriga. Gawaarida la dhigto garoonka diyaaradaha waa lacag la'aan illaa 7 Abriil 2019.
Gegada dayuuradaha ee Aasiya dhinaceeda Istanbul waa Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Sabiha Gökçen (), 30 km bari ka xigta Xarunta Magaalada. Waxay inta badan leedahay duulimaadyo gudaha ah, oo ay leedahay Anadolu Jet (oo ka baxsan miisaaniyadda Turkish Airlines). Si kastaba ha ahaatee waxay leedahay duulimaadyo caalami ah oo Yurub oo dhan ah Pegasus iyo kuwa kale ee xambaara, gaar ahaan xagaaga marka ay tani tahay waddo jaban oo loo aado meelaha loo dalxiis tago ee xeebaha Turkiga iyo Waqooyiga Qubrus. Waa garoon diyaaradeed oo weyn, dhif iyo naadirna leh sida Atatürk oo kale, oo leh dhammaan agabyada rakaabka ee dhulka iyo dhinaca hawada. Hoolka bixitaanka dhulka ee dhinaca dhulka ah waa mid raaxo leh. Haddii aad halkan joogsi dheer ku leedahay, LGM CIP Lounge waa heshiis wanaagsan, oo leh biir bilaash ah oo aan xad lahayn, khamri, cabitaanno fudud, cunto fudud iyo cunto fudud oo ah entry 12 qofkiiba. Dibedda, waxaa jira jeeg ammaan oo kaliya si aad u gasho terminaalka (way baari doonaan laakiin ma qaadi doonaan dareeraha) markaa jeegga caadiga ah ka dib boorsada si aad u hesho dhinaca hawada. Waxaa jira huteel ku yaal gegida dayuuradaha, nus-darsin (tusaale ahaan Hilton) oo ku yaal Kurtköy laba km waqooyi, ka dibna darsin kale oo ku taal magaalada Pendik (xeebta Marmara oo u dhow saldhigga YHT) 6 km koonfur. Ikhtiyaarada ugu weyn ee gaadiid -raaca iyo ka imaadka magaalada waa:
Tareen: Gegada diyaaradaha Sabiha Gök isen waxay 12 KM u jirtaa xarunta tareenka ee Pendik YHT, tagsi ama bas 132H si ay u qabsato tareenada dheereeya ee bari ilaa Ankara iyo Konya.
Metro-ga wali ma gaarin garoonka diyaaradaha, laakiin Line M4 waa la kordhiyay ilaa iyo Tavşantepe oo u dhow Pendik.
Havabüs waxay ka socotaa garoonka diyaaradaha ilaa Taksim oo ku taal Bartamaha Magaalada (50 km, 60-90 min, 18 TL), Yenisahra oo ah xarun gaadiid oo dhinaca Asia ah (50 daqiiqo, 10 TL) iyo Kadıköy oo ah markabka doonta ee Eminönü ee Sultanahmet Old City (60 min, 14 TL + doon 3 TL). Basasku waxay shaqeeyaan 30 -kii daqiiqaba kasta inta u dhaxaysa 04:00 iyo 01:00. Ku iibso tigidkaaga baska, Istanbulkart waa ansax.
Baska magaalada (İETT bus) waa kuwa ugu raqiisan. Wadooyinka ugu waaweyn waa:
Kadıköy bas ahaan E-10 (oo sii mara Kurtköy, waxay socotaa 24 saacadood) ama E-11, oo qaadata 60-90 daqiiqo, in ka badan oo ah taraafikada culus. Waxaad ubaahantahay tigidh laba-aag ah, qiimo 7 TL.
tag Taksim iyo meelaha kale ee dhinaca yurub ah, raac baska E-3 illaa 4. Tani waxay socotaa 24 saacadood, waxay qaadataa 2 saacadood waxayna u baahan tahay tigidh saddex-aag ah 10 TL.
Wadooyinka kale waxaa ka mid ah E-9 ilaa Bostanci, 16S ilaa Metrobus Uzunçayir, KM-20 ilaa Pendi̇k & Kartal Metro, KM22 ilaa Cevi̇zli̇ Platform, E-18 ilaa Altuni̇zade & Ümrani̇ye, iyo 122H iyada oo loo marayo Yeni̇şehi̇r ilaa 4.Levent Metro.
Gawaarida & wareejinta: baska yar ee loo raaco dhinaca Yurub ee magaalada waxaa laga yaabaa inuu ku kaco € 90 oo loogu talagalay 4 qof.
Taksiyada Taksim waxay ku kacaysaa qiyaastii 120 TL, iyo Kadıköy oo ku dhow 90 TL.
Shirkadaha diyaaradaha ee adeegsada Sabiha Gököen midkoodna ma shaacin qorshayaasha ay ugu guurayaan garoonka cusub: way weyn tahay in la qaado, laakiin kuma haboona dhanka Aasiya ee Istanbul.
Saldhigga sirta ah ee Sirkeci Station, oo ku soo dhoweeyay rakaab ka yimid Yurub magaalada ku taal geeska Aasiya tan iyo 1890…… iyo Teutonic Haydarpa Stationa Station, oo bixisay aragtida ugu horreysa ee Yurub rakaab badan oo ka kala yimid qaybo fog oo Aasiya ah tan iyo 1908.
Tan iyo waayihii halyeeyga Orient Express, safarka tareenka ayaa ahaa habka caadiga ah ee lagu gaaro Istanbul. Wali waa safar xiiso leh, laakiin tareenadu mar dambe ma gaaraan terminaalkoodii caadiga ahaa. Kuwa Yurub ka imanaya waxay ku dhammaadaan Halkali galbeedka magaalada, halkaas oo aad ugu beddesho tareenka marmaray ee marba mar mara si aad u gaarto Xarunta. Kuwa ka imanaya bariga waxay ku dhammaadaan Sogutlucesme ee Kadıköy dhinaca Aasiya.
Tani waxay ka dhigan tahay in Istanbul ay leedahay laba saldhig oo waaweyn oo terminus ah oo aan lahayn wax tareenno waaweyn ah. Sirkeci dhinaca Yurub waxay ku taal shabakadda Marmaray, tareenno iskutallaab ah iyo tareennada Metro waxay maraan dhulka hoostiisa qoto dheer laakiin waxba kuma laha heerka waddada. Haydarpaşa | alat = 40.9962 | dheer = 29.0188}} Aasiya haba yaraatee wax tareen ah ma leh. Labada idaacadoodba waxay uqalmayaan booqasho deg deg ah inay u noqdaan taallo taariikhi hore ujiray safarka tareenka. Labadooduba waxay leeyihiin xafiisyo tikidhada, in kasta oo ay caadi ahaan ka fudud tahay inaad khadka tooska ah uga iibsato websaydhka Waddooyinka Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkiga, TCDD.
Tareenada ka yimaada bariga
Tareenada xawaaraha sare leh (oo loo yaqaan YHT: "Yüksek hızlı tren") ayaa mar labaad gaadhay bartamaha Istanbul, iyagoo si ku meel gaadh ah u yimid Sogutlucesme dhinaca Aasiya, oo ku dhow mustaqbalka Haydarpaşa terminus. Laba tareen maalintii waxay ku sii socdaan Bosphorus iyagoo ka wacaya Bakırköy oo ku yaal hareeraha galbeedka waxayna ku sii hakanayaan Halkali. Waqtigan xaadirka ah ma istaagaan meel kasta oo ka mid ah aagga Sultanahmet / Old City, mana ku xirmaan tareennada Yurub - u beddelo tareennada Marmaray ee soo noqnoqda labada ujeedo.
Waxaa jira adeegyo isdaba joog ah oo YHT ah oo laga helo Eskişehir (3 saacadood) iyo Ankara (4½ saacadood), iyo saddex maalintiiba laga bilaabo Konya (4½ saacadood). U beddel magaalooyinkaas meelaha loo sii aadayo bariga, sida Adana, Tatvan iyo Kars - waxaana rajeynayaa Tbilisi iyo Baku laga bilaabo dayrta 2019.
Cidhifka bari ee magaalada, tareenada YHT waxay sidoo kale ka wacaan Bostanci, Pendik iyo Gebze. Pendik, 25 km bari ka xigta Xarunta Magaalada, waa joogsi habboon oo laga soo wareejiyo madaarka Istanbul Sabiha Gökçen (10 km, tagsi ama bas). Tixgeli wadadan haddii aad damacsan tahay inaad u duusho Istanbul oo isla markiiba aad xagga bari aaddo. Pendik lafteedu waa degmo yar oo leh hudheelo iyo kafateeriyaal, oo leh saldhigga baska iyo tagsi oo ku yaal dhinaca woqooyi ee saldhigga YHT.
Tareenada ka yimaada Yurub iyo Yurubta Yurub
Berths tareenka ka imanaya Istanbul ilaa Sofia
Tareenka hurdada ayaa ka taga Sofia agagaarka 21:00 habeennimo, isagoo sii maraya Plovdiv, Kapikule ee xadka, iyo Edirne, si loo joojiyo Halkali markay tahay 07:40. Laga bilaabo Juun ilaa Sept. hurdo kale, the Bosphor Express, ayaa ka tagaya Bucharest saacadu markay tahay 12:45, kuna sii socota Ruse ilaa Kapikule. Halkan wuxuu ku xiran yahay tareenka ka socda Sofia, rakaabka labada tareenna waa inay u baxaan howlaha xuduudaha, ka hor intaanay u sii gudbin Halkali. Adeegga socdaalka galbeed wuxuu ka tagayaa Halkali 21:40 si uu u gaaro Sofia illaa 09:00 iyo Bucharest ilaa 19:00 maalinta xigta. Laga bilaabo Oktoobar illaa Maajo tareenka ka soo baxa Bucharest ma socdo, markaa waxaad ku beddelaysaa Ruse ka dibna mar kale Kapikule, oo leh jadwal isku mid ah. Tareenada ka imanaya galbeedka fog (Budapest iyo Belgrade) kuma xirna tareenada Turkiga, marka waxaad u baahan tahay inaad ku hoyato Sofia ama Bucharest midkood.
Khadkii Budapest-Belgrade ayaa carqaladeeyay sanadka 2019 oo dhan shaqooyinka injineernimada. Tareenada Belgrade-Sofia ayaa si caadi ah u socda, laakiin waxaad u halgami doontaa inaad hesho xiriir macquul ah oo ka yimaada Budapest iyo Belgrade, sidaa darteed waxaa fiican inaad Turkiga gaarto adigoo maraya Bucharest
Inta u dhaxaysa Halkali iyo Xarunta Magaalada, isticmaal tareenka marmaray ee Marmaray, oo bilaabmay Maarso 2019. Ogolow saacad; tareenadu waxay socdaan 15 -kii daqiiqaba mar oo qiimuhu wuxuu ku saabsan yahay 4 TL (oo fiiri “Wareeg”). Tareennada subaxdii soo gala magaalada ayaa mashquul ku ah dadka raaca, adeegyada dibadda ee fiidkii waa inay ahaadaan kuwo aamusan. Ilaa xiriirkan la furo, TCDD waxay wadday bas isku xira: ma aysan shaacin in la baajiyay laakiin waxaa ugu badbaado badan in loo maleeyo inay dhowaan noqon doonto.
Waxa kale oo jira tareen goboleed ka yimaada Kapikule oo sii mara Edirne ilaa Halkali hal mar maalintii. Bishii Luulyo 2018 tareenkan wuxuu ka baxay wadada u dhow Tekirdağ, halkaas oo ay ku dhinteen 24 qof. Shilka waxaa sababay roob culus oo wiiqay wadada. Burburkii ayaa si deg deg ah loo dayactiray tareenaduna waxay dib ugu bilaabeen sidii caadiga ahayd
Gunaanadka Saldhiga Halkali waxay 25 km galbeed ka xigtaa bartamaha Istanbul. Wax yar oo ka mid ah tas-hiilaadka halkan - gaar ahaan, ma jirto meel laga beddelo lacagta illaa aad ka hesho magaalada hoose.
Safar qurux badan oo raaxo leh, sanadkiiba mar Venice Simplon Orient Express wuxuu ka socdaa Paris ilaa Halkali. Waxaad ku safraysaa tababarayaal qaali ah oo dib loo soo celiyay 1930s oo aad ku raaxeysatid cunnada heerka koowaad. Tigidhadu waxay ka bilaabmaan ,13,500 XNUMX; waan ka xumahay, kaarkaaga Eurail-ka ah halkan kuma caawin doono.
Basaska iyo tababarayaasha ka socda Yurub iyo Gallipoli ayaa joogsada goobta ugu weyn Saldhigga basaska ee Esenler (Xarunta basaska ee Esenler, sidoo kale loo yaqaan Bayrampaşa Otogar, inkasta oo ay dhif tahay), qiyaastii 10 km galbeed ka xigta Xarunta Magaalada, oo ku taal dhinaca Yurub. Iyada oo leh 168 xafiisyada tikidhada iyo irdaha, dukaamo, maqaayado, hoteel, saldhig boolis, rug caafimaad iyo masaajid, the Büyük Otogar (“Saldhigga weyn ee basaska”) waa magaalo lafteeda, in kasta oo ay ka maqantahay miiska dhexe ee macluumaadka, sidaas darteed waa inaad weydiisaa hareeraha xafiisyada shaqsiyaadka qiimaha iyo jadwalka jadwalka aad u socoto. Basas sharaf leh (adeegga) oo ay bixiyaan basaska shirkadaha bilaashka ah ama tagaasida ayaa si fudud kuu geyn doona Xarunta. Metro -ga (M1A, M1B) ayaa sidoo kale istaaga otogar.
Marka lagu daro magaalo kasta iyo magaalo weyn oo ku baahsan dalka, waxaa jira basas maalinle ah oo taga / ka yimaada magaalooyinka Bulgaria, Greece, Waqooyiga Makedoniya iyo Romania. Laga soo bilaabo / Ilaa Thessaloniki (Giriigga): Qiimaha tikidhada ayaa ku dhow € 45 (hal waddo), return 80 soo laabasho. Ka yimid / ilaa Sofia iyo Varna (Bulgaria): ~ € 25 (hal waddo). Laga soo bilaabo / ilaa Skopje (Waqooyiga Makedonia): ~ € 40 (hal waddo)
Xarunta labaad ee dhinaca Yurub waxay ku taal Saldhigga basaska ee Calibeyköy meel u dhow marinka bannaanka ee Istanbul. In kasta oo ay u muuqato si habsami leh oo qabow oo bir-iyo muraayad ah, iyo cabbir aad u yar marka la barbar dhigo Esenler, kani waa saldhigga basaska ee aan la filayn. Iyada oo aan lahayn gaadiid dadweyne oo ku habboon oo ku xiraya Bartamaha Magaalada, waxaa laga yaabaa inaad u aragto inay faa'iido u leedahay oo kaliya inaad ka soo gasho/ka timaaddo xafiisyada shirkadaha basaska ee ku xeeran Fagaaraha Taksim, haddii adeegga bas ayaa la heli karaa (ka sii fiican in hore loo weydiiyo halkii aan ku dhegi lahaa meel dhexe).
Xuquuqda bangiyada Bosphorus, Saldhigga basaska Harem (yaan lagu jahwareerin rubucyada dumarka ee Topkapı Palace oo isku magac ah) waa xarunta ugu weyn ee basaska laga raaco dhinaca Anatolia (Aasiya), oo si fudud loogala soo xiriiri karo Sirkeci dhanka Yurub iyadoo doonta la raaco. Si kastaba ha noqotee, halkii aad ku kaxayn lahayd saldhiggan, shirkadaha basaska qaarkood (gaar ahaan kuwa waaweyn ee bixiya liis dheer oo meelaha la aadayo) maalmahan waxay dejiyeen xarumo u gaar ah oo ku yaal meelo ku baahsan xaafadaha dhinacan, iyagoo rakaabka la baxa adeegga basaska ka yimaada aagaga dhexe sida Kadıköy.
Baska ka taga Georgia wuxuu ku dhammaadaa boosteejada basaska Aksaray, oo u dhow Yenikapi metro station.
Tower-ka Maiden ee dhanka koonfureed laga galo Bosphorus
Waxaa jira maraakiibta badda madow dhowr jeer usbuucii oo taga Chornomorske, oo ah dekedda weyn ee Odessa ee Ukraine, oo qaadata 27 saacadood. Waxay socdaan sanadka oo dhan waxayna qaataan gawaarida; runtii gawaarida xamuulku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ganacsigooda, maaddaama safarro badan ay maalmahan duulaan. Goobta doonta laga raaco waxay ku taal Haydarpaşa, oo ku taal xaruntii hore ee tareenka. Sanadihii la soo dhaafay Doomahan waxay u shiraacdeen dekado kale oo ku yaal Badda Madoow laakiin mar dambe sidaas ma yeelaan.
Ma jiraan doonyo kale oo caalami ah oo taga Istanbul - eeg “Ka ag -dhow” doonyaha maxalliga ah ee ku xeeran Badda Marmara. Maraakiibta dalxiiska ayaa inta badan ku soo xirta dhinaca Yurub, agagaarka Karaköy/Galataport, oo u dhow Xarunta taariikhiga ah. Maraakiibtani waxay ku jiraan safarrada dalxiiska, ka hubso hawlwadeenka in safar dhibic-ilaa-dhibic ah oo ku dhammaanaysa Istanbul ay suurtogal tahay.
Isu socodka magaalada Istambul wuxuu noqon karaa mid culus; filo werwer walaac leh maxaa yeelay waa lagaa jarayaa oo lagugu xirayaa si joogto ah. Xitaa haddii aad ku socoto waddo hal dhinac ah, had iyo jeer ka filo qof inuu kuu yimaado. Magaalada waxay martigalisaa in kabadan 1½ milyan oo gawaari ah waxaana jira baahi xoog leh oo loo qabo dhisida wadooyin cusub ama kuwa kale oo badalan.
Haddii aad ku timid Istanbul baabuur, oo aadan aqoon u lahayn jidadka, waxaa fiican inaad dhigatid gaarigaaga meel aamin ah oo aad raacdid gaadiidka dadweynaha si aad ugu soo wareegto.
Magaalada, oo jiifa laba qaaradood oo kala duwan oo ay kala go'do Bosphorus, waxaa isku xira laba buundo. Buundada ku taal koonfurta, una dhow Badda Marmara, waxaa loo yaqaan "Bosphorus Bridge". Buundada u dhow Badda Madow waxaa loogu magac daray “Fatih Sultan Mehmet Bridge” waana ka dheer tahay tan hore. Labaduba waa buundooyinka lacagta laga bixiyo, waana inaad bixisaa lacag si aad uga gudubto.
Midkoodna buundada ma aqbasho lacag kaash ah: lacag bixinta waa in lagu bixiyaa iyadoo la isticmaalayo kaararka elektaroonigga ah, midkoodna nooca warqadda (HGS) ama iyada oo loo marayo tarjumaan lagu rakibay dhinaca hore ee gaariga (ETC).
Maalmaha shaqada, waxaa jira ciriiri taraafiko saacad-dheer leh oo ka jira waddooyinka waaweyn ee keena labada buundo, gaar ahaan dhanka galbeed ee subaxnimada iyo bariga fiidkii, maxaa yeelay dadka badankood waxay ku nool yihiin dhinaca Anatolia laakiin waxay ka shaqeeyaan dhinaca Yurub.
Baabuur dhigasho ba'an ayaa ka jirta Istanbul, inbadan oo jirana aad ayey qaali u yihiin. Waxaad arki doontaa gawaari badan oo taagan waddooyinka dhinacyadooda, albaabbada garaashka hortooda xitaa.
Calaamadaha waddooyinka ayaa dhif ah. Waa wax caadi ah in lagala wareego oo la weyddiiyo tilmaamo, waa wax ay dadka waddanka u dhashay iyo taksiilayaashu sameeyaan inta badan.
Istanbul way weyntahay, markaa waxaad ubaahantahay gaadiid dadweyne inta udhaxeysa hoygaaga iyo barta aad kaqaadato / ka dejiso. Ka bixida magaalada, jidadka ugu fiican waa:
West Yurub: waxaad rabtaa inaad ku sii socoto wadada weyn ee E-80. Marka hore raac bas 448 oo ka baxa Yenibosna metro station (khadka koonfureed, oo u dhow garoonka diyaaradaha Ataturk) waqooyiga dhanka Mimarsinan. Kabax kadib 5-km kadib markaad ka gudubto E-80.
East Aasiya: mar labaad, waxaad dooneysaa inaad gaarto wadada weyn ee E-80. Malaha sida ugu dhow ee aad ku bilaabi karto suulka waa Pendik: ku gaadho metro sida lagu sharraxay xarunta tareenka ee YHT. Kadib bilaw inaad taabato D-100 oo ku biiri doona E-80. Wiish maxalli ah illaa Gebze ama Izmit ayaa sidoo kale ku dhowaan doona waddadaas.
Khariidad deg deg ah oo ku socota Istanbul (tareenka magaalooyinka iyo Metrobus nidaamyada)
Nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Istanbul way adkaan kartaa in la ogaado; Khadadka khadku si liidata ayey isugu xirmaan, khariidaduhu waa dhif oo badanaa waa inaad wareejisaa, oo aad bixisaa qiimo kale, si aad u gaarto halkaad u socoto. Si kastaba ha noqotee, haddii aad xoogaa xoogaa geliso, waad iska ilaalin kartaa tagaasida oo aadan socod badan sameyn.
Mar kasta oo aad taraam, metro, bas, ama doon ku isticmaashid nidaamka gaadiidka dadweynaha, waxaad u baahan doontaa inaad tikit ama tikidh adeegsato. Tikidhada hal adeegsiga ah waxay ku kacaysaa 5 TL (Janaayo 2017) waxaana laga iibsan karaa makiinado iibiya kala duwan basaska, tareenada iyo saldhigyada dhulka hoostiisa mara ama tikidhada la oggol yahay / Iibiyeyaasha Istanbulkart (badanaa kiosaska wargeysyada). Qiimaha tikidhada ee basaska, taraamyada iyo mitrooga way kala duwan yihiin. Kaliya lacag caddaan ah oo ku jirta lira turkiga ayaa laga aqbalaa kaydadka tigidhada ee gaadiidka dadweynaha, ma laha kaararka amaahda ama lacagaha qalaad. Nidaamka tareenka dhulka hoostiisa mara ee Istanbul ma bixiyo tikidhada gudbinta: isbedel kasta oo loo sameeyo khad cusub wuxuu u baahan yahay qiimo cusub, illaa aad isticmaasho Istanbulkart, hoos ka eeg.
Markaad u safreyso Istanbul diyaarad ahaan, aad ayey uga jaban tahay (oo ka xiiso badan tahay) inaad isticmaasho nidaamka mitrooga si aad ugu dhawaato hoygaaga intii suurtogal ah ka hor intaadan lugeynin iyo / ama aadan tagsi tagin meesha aad degan tahay. In kasta oo gaadiidka dadweynaha laga yaabo inuu waxyar wareersan yahay, basaska tagaasida / kirada ka qaada garoonka diyaaradaha ayaa caan ku ah qiimo jaban.
Haddii gaadiidka dadweynaha uu yahay kan aad dooratay inaad wareejiso, tixgeli inaad isticmaasho codsiyada gaadiidka dadweynaha si aad si fudud ugu aragto joogsiyada, saldhigyada iyo boosteejada u dhow ama aad u aragto jidad kale oo loogu talagalay halka aad qorsheyneyso. TETT waxay leedahay mid rasmi ah oo la yiraahdo Mobiett kaas oo loo heli karo macruufka, Android ama Windows.
İstanbulkart waa kaarka casriga ee gaadiidka dadweynaha ee Istambul, oo loo isticmaali karo tikit ahaan basaska, taraamyada, tareenada hareeraha, metro, doomaha maxalliga ah, iwm. Haddii aad joogto Istanbul in ka badan hal maalin ama labo oo aad rabto inaad isticmaasho gaadiidka dadweynaha, waxay iska bixin doontaa safarkiisa dhowr safar. Waxaa jira lacag dhigasho hal mar ah oo ah 6 TL. Intaa ka dib waxaad iibsan kartaa dhibco.
Waxaad u taabanaysaa Istanbulkart akhristaha markaad fuusho baska ama aad gasho taraamka ama metro platformka. Faa'iidada ugu weyn ee koox safar ah ayaa ah inaad mid kaliya iibsan karto oo aad taaban karto inta jeer ee ay jiraan rakaab (sida London ka duwan Oyster kaarka, looma baahna taaban). Waad ka iibsan kartaa ama dib ugu buuxin kartaa waabab loogu talagalay oo ku yaal basas weyn, taraam, ama saldhigga mitrooga, iyo sidoo kale meelaha kale sida joornaalada ku dhow meelaha basku istaago. Waxaa jira mashiinno dib-u-buuxin oo ku yaal meesha ugu badan ee metro ama taraamyada iyo boosteejada doonta. Istanbulkart waxay bixisaa sicir dhimis aad u qiimo jaban (waxyar in kabadan qiimaha safarada aan xiriirka lahayn iyo xitaa ka raqiisan wareejinta) marka la barbardhigo tikidhada caadiga ah ee caadiga ah, iyo sidoo kale qiimo dhimis ku saabsan wareejinta iyo safarada wareega gaaban (marka la isticmaalo marar badan mudo xadidan, qiyaastii 1½ saacadood) tan iyo markii ugu dambeysay ee aad isticmaashay). Tusaale ahaan, safarka Istanbulkart waa ~ 2.60 TL, halka tigidh keliya yahay ~ 5 TL. Safarka wareega ee garoonka diyaaradaha wuxuu bixinayaa in kabadan kala bar kharashka kaarkaan. Waa inaad iibsataa kaarka (10 TL) oo leh 4 TL oo ah isku dheelitirkiisa, kaarka lama soo celin doono, sidoo kale wax deyn ah kuma harin Istanbulkart. Kaarka waxaa laga iibsan karaa dukaamo yar yar oo geeska ku yaal oo ku yaal magaalada oo dhan. Waxaa jira mashiinno dib-u-dejin lagu sameeyo saldhigyada badankood (in kasta oo daruuri aysan ahayn irridda oo dhan) laakiin iyagu ma qaataan qadaadiic, sidaas darteed waa inaad ku xirnaataa kuwa 5 iyo 10 ee Lira biilasha ah illaa aad rabto inaad kaarkaaga ka qaadatid tiro badan oo ah maya isbedel ayaa la siiyaa, sidoo kale.
Istanbulkart waa cusub, waxayna badalaysaa tii hore Akbil biraha taabashada-calaamadda oo qiimo dhac. In kastoo Kiosks qaar wali leeyihiin Akbil calaamadaha halkii Istanbulkart calaamadaha - laakiin waxaad caadi ahaan ka iibsan kartaa ama ku shubi kartaa Istanbulkart kiosk kasta oo ay ku taal Akbil Waxa kale oo jira waxa loo yaqaan "mavi kart" ama kaarka buluuga ah oo ah ikhtiyaar ka raqiisan dadka isticmaala badan ee gaadiidka dadweynaha laakiin leh xaddidaadyo, waxaa isticmaali kara hal qof oo sawirkiisa iyo magaciisa lagu daabacay, waa waxay bixisaa 180 safar oo ah bas / tram / metro oo ay tahay in la isticmaalo muddo ugu badnaan ah 30 maalmood waxayna ku kacaysaa 200 TL + 10 TL daabacaadda kaarka markii ugu horreysay.
Tareen ku raac Istanbul
The Tareenka magaalada Marmaray mara, oo la furay Maarso 2019, wuxuu isku xiraa saldhigga dhexe ee Halkali ee galbeedka Zeytinburnu, Sirkeci iyo Üsküdar labada dhinac ee Bosphorus, iyo Bostancı, Kartal, Pendik iyo Gebze dhanka bari; oo lagu daray saldhigyo badan oo yar yar oo xaafadaha ku yaal. (Pendik iyo Gebze waxay ku yaalliin khadka weyn ee YHT.) Tareenadu waxay socdaan 15 daqiiqo kasta 06: 00-23: 00 waxayna u dhexeeyaan Bartamaha magaalada iyo dhammaadka khadka waxay qaadataa saacad, qiimihii ilaa 4 TL. Qaybaha dhexe waxaa lala wadaagaa metro.
Magaalada Metro waxay leedahay lix xariiq, kuwaas oo kaliya labada hore ay yihiin kuwa waxtar badan u leh booqdaha:
Sadarka M1A isku xira garoonka diyaaradaha Atat Atrk (Havalimani) iyo xarunta tababarka ugu weyn (Bus Station) ilaa Aksaray, halkaas oo aad ka qaadi karto taraamka T1 ilaa Xarunta magaalada, kadibna aad u tababarto xarunta Yenikapı si loogu xiro M2 iyo Marmaray. Waxa kale oo jira xariiq laan (M1B) kaasoo u adeegta xaafadda galbeed ee Kirazlı. Tareenada oo dhan waxay u adeegaan qeybta u dhaxeysa Yenikapı iyo boosteejada basaska, ka dibna waxay u leexdaan garoonka diyaaradaha ama Kirazlı.
Sadarka M2 wuxuu ka bilaabmaa Yenikapı wuxuuna ka gudbaa geesta dahabiga ah, isagoo sii maraya Şişhane iyo Taksim Square ilaa Mecidiyeköy iyo Levent oo ku yaal degmada ganacsiga, iyo woqooyiga oo sii aada Hacıosman (oo ah xarun weyn oo basaska laga raaco xaafadaha waqooyiga Yurub, tusaale Sarıyer).
Sadarka M3 waxay kusii socotaa waqooyi-galbeed M1B terminal-ka Kirazlı.
Sadarka M4 dhinaca Aasiya waxay ka socotaa Kadıköy ilaa xaafadaha xeebta Marmara ilaa Kartal iyo Pendik (laakiin 1 km u jirta xarunta Pendik YHT.) Waxaa la qorsheynayaa in la gaarsiiyo garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen sannadaha soo socda.
Sadarka M5 dhinaca Aasiya wuxuu maraa inta udhaxeysa Üsküdar ee Bosphorus iyo duleedka outerekmeköy ilaa Ümraniye.
Sadarka M6 (sidoo kale loo yaqaan mini Metro) waa mid laga soo qaado xarunta Levent ee M2, oo u adeegta degmada sare ee Etiler iyo xerada weyn ee Jaamacadda Boğaziçi ee Hisarüstü.
Inta badan magaalada wali kama adeegin metro (waxay noqon doontaa sanado kahor intaan garoonka cusub laxirin), iyo masaafada udhaxeysa saldhigyada ayaa ka weyn tan magaalooyinka Yurub badankood. Laakiin metro waa deg deg meeshuu maro wayna si taxaddar leh oo nadiif ah oo casri ah, iyada oo inbadan oo ka mid ah ay taariikhaysan tahay qarnigii 21aad Khadadka badankood waa kuwo qoto dheer oo dhulka hoostiisa ah qaarna waxay leeyihiin irido laga soo galo jidadka mashquulka badan oo leh jidad lugeynaya ama buundooyinka marinka kaliya laga helayo, marka u diyaar garow inaad xoogaa lugeyso markii aad tagaysid iyo marka laga imanayo saldhigyada. Xawilaaduhu had iyo jeer waxay u baahan yihiin ka bixitaan iyo dib u soo galista nidaamka taas oo macnaheedu yahay qiimo cusub oo buuxa (oo wata tikityo hal adeegsi ah) ama qiimo jaban oo dhanka isku xirka ah (Istanbulkart). Maaha inaad rogto kaar kasta oo bixitaanka metro ama taraamyada laakiin waa inaad ku sameysaa Istanbulkart oo ku taal Metrobus, haddii kale waxaa lagaa qaadayaa qiimaha masaafada ugu badan.
Nidaamkii ugu horreeyay ee dhulka hoostiisa mara ee Istanbul wuxuu bilaabmay qarnigii 19aad, markii tareenka dhulka hoostiisa mara ee “Tünel” loo dhisay inuu ka hawlgalo Karaköy ilaa Istiklal Street 1875, isagoo u socdaalay 573 m dusheed. Weli way socotaa oo way ku anfacaysaa ka gudubka Buundada Galata (dhinaca Beyoglu) ilaa Istiklal Caddesi ee caanka ah (waddada weyn).
Dhismaha culus ee kordhinta iyo khadadka cusub ayaa si xawli ah usocda, iyadoo farqiga udhaxeeya M1 iyo M2 lagu xiray saldhigga Yenikapı. Waad ku xidhi kartaa M4 iyo M5 adoo maraya Marmaray saldhigga Yenikapı. Nasiib darrose khariidadaha shabakadaha badankood waxay horey u muujinayaan in aan weli la dhisin ballaarinno hoos hadh ah oo fudfudud ku ah jaleecada caadiga ah iyo jahwareerka markaad ka fekereyso halka aad ka aadi karto haddii aad booqatay Istanbul sannad ama laba sano ka dib.
Waxa kale oo jira nidaam madadaalo leh oo isku xidha Taksim iyo Kabataş halkaasoo aad ka raaci karto doonta isla markaana aad uga gudbi karto dhinaca Anatolia, sidoo kalena aad u wareejin karto taraamyada u socda magaalada hore.
Astaamihii hore ee balaastigga ahaa ma sii shaqeynayaan: sida kaliya ee lagu bixin karo metro waa Istanbulkart ama kaararka xaddidan. Saldhigyada metro-ga ayaa sameeya ma haysato tigidh tigidh shaqaale ah, markaa waa inaad ku heshaa tikidhadaada ama aad ku buuxisaa aaladda Istanbulkart mashiinnada tikidhada. Si aad u iibsato kaararka xadidan ee xadidan, gali qadaadiic ama qoraal ka dibna riix badhanka calaamadeysan onay / okay. Hal baaskiil ayaa ku kacaya 4 TL tareen kasta oo magaalo ah oo ku yaal Istanbul inkasta oo Istanbulkart (fiiri kor) laga yaabo inay ka kharash badan tahay safarkaaga.
Tareenada casriga ah ee Istanbul
Inta badan ay adeegsadaan dadka safraya sida ay tahay waxay u adeegtaa goobo badan oo caan ah iyo doomaha, kuwa Istambul khadka taraamka ugu weyn (T1) abeesadu waxay ku sii socotaa ku dhowaad 20-km wadada ugu badan ee Yurub ee udhaxeysa Kabataş, bariga bari ee Bosphorus (oo ku xiran M2 metro khadka laba-istaag F1) iyo galbeedka galbeedka Bağcılar ( ku xiran M1B iyo M3 metro Khadadka), oo ah xaafad ku taal waqooyi-galbeed. Waxaa ka mid ah joogsiyada waaweyn, laga bilaabo bari ilaa galbeed, waa Karaköy iyo Eminönü siday u kala horreeyaan waqooyiga iyo koonfurta bangiyada Golden Horn (oo ay ka gudubto Buundada Galata), Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet (oo u dhow inta badan goobaha taariikhiga ah ee magaalada hore), Çemberlitaş , Beyazıt, Laleli, Aksaray (10 daqiiqo oo ka fog saldhigga Yenikapı ee Marmaray), Yusufpaşa (oo u dhow saldhigga Aksaray ee M1A iyo M1B metro), Topkapı (oo u dhow derbiyadii hore ee magaalada), iyo Zeytinburnu (xiriir kale oo la xiriira M1A). Galbeedka laga bilaabo Topkapı, wuxuu gaaraa meelo fog fog ilaa xaafadaha galbeedka, kuwaas oo dhif ah, had iyo jeer, booqda celceliska socotada.
Wadada T1 waxaa u adeega laba xariiq oo lambarro kala duwan leh: # 38 waxay ku socotaa dhererka T1 oo dhan inta udhaxeysa Kabataş iyo Bağcılar, halka midka aadka uga gaaban # 47 uu udhaxeeyo saldhigyada Eminönü iyo Cevizlibağ (kan labaad oo loo soo gaabiyo C .bağ-A.Ö.Y. ee calaamadaha baabuurta taraamka). Si kastaba ha noqotee, labada khadadba waxay ka wacaan saldhigyada ugu xiisaha badan socdaalayaasha maraya Old City. Inta lagu jiro saacadaha mashquulka subixii iyo fiidkii taraam kasta oo taraam ah wuxuu maraa # 47, halka inta kale ee maalinta, inta badan ay u ordaan sidii # 38.
In kastoo laga yaabo inaad isku mid u isticmaasho AKBİL / Istanbulkart metro iyo taraamka, waa inaad bixisaa qiimo kale markasta oo aad khadadka bedesho (sicir jaban oo tartiib tartiib ah haddii aad isticmaasho İstanbulkart).
Inta lagu jiro subaxda iyo fiidka saacadaha degdegga ah (Qiyaastii inta udhaxeysa 07: 00-09: 00 iyo 17: 00-19: 30 siday u kala horreeyaan), gawaarida taraamka waxaa ku qulqulaya saxmad sidaa darteed haddii aad damacsan tahay inaad u qaadatid dhowr saldhig oo wadada ka hooseeya, xitaa ha ku dhibin — socodka taa badalkeed kama daalinayso oo kaliya istaagida waxa aasaas ahaan ka camiran ka badan sardinka, sidoo kale waa dhakhso badan tahay maadaama aad u badan tahay inaad awoodi doonto inaad gasho taraamka labaad ama saddexaad ee saldhigga ka wacaya dadka badan.
Es gibt auch khadka taraamka kale isku xirka xaafadaha la deggan yahay iyo warshadaha ee woqooyiga iyo Xarunta Magaalada: T4 (taas oo u eg metro-taraamka nidaamyada waqooyiga-galbeed ee Yurub, maadaama ay ku taal dhulka hoostiisa qayb ka mid ah marinkeeda), oo u socota Sultançiftliği, oo ku xirmeysa saldhigga Topkapı ee khadka T1. Si kastaba ha noqotee, khadkani waa mid aad u yar, haddii ay jiraan, loo isticmaalo celceliska socotada.
Marka laga reebo taraamyada casriga ah ee kor ku xusan, Istanbul waxay leedahay laba gaagaaban, oo gooni ah taraamka dhaxalka khadadka, kuwaas oo ka soo jiidasho badan fursadaha gaadiidka wax ku oolka ah. Tareenada dib loo cusbooneysiiyay ee soo bilaabmay sanadihii 1920-meeyadii ee wadada İstiklal ee dhinaca Yurub (T2 ama NT), halka dhinaca Aasiya, nidaam wareeg ah oo u dhexeeya Kadıköy iyo degmada Moda ee u dhow waxaa ka shaqeeya 1960-kii waddooyinka laga keeno Jarmalka (T3).
Khadadka taraamka waxaa maamula Metro Istanbul.
Shabakada tareenka ee magaalada bur-buriya ee burbursan ayaa heshay kobcin weyn Oktoobar 2013 markay ahayd Marmaray, Kanaal qaali ah oo qaaradaha ka yimaada Yurub ilaa Aasiya oo hoos yimaada Bosphorus, ayaa ugu dambeyn la furay toban sano ka dib dhisme. Khadadka safka ee tareenka ka baxa Yenikapı (M1A, M1B, M2) oo joogsada bartamaha Sirkeci (T1) ilaa Üsküdar (M5) iyo Ayrılıkçeşmesi (M4) daqiiqado, oo lagu kordhiyay shaqooyinka labada darafba. Ma ahan meel u dhow muuqaal ahaan sida doomaha, laakiin si dhakhso leh, iyo yaab injineernimo run ah.
Khadadkii tareenka hore ee xaafadaha / safarka (tareenka baaskiilka) Safarka dhanka galbeed ee ka imanaya Sirkeci (Yurub) iyo bariga Haydarpaşa (Aasiya) ayaa loo xidhay kor u qaadista iyo isdhexgalka Marmaray, iyadoo dib loo furay, dhowr jeer oo hore dib loo dhigay, lana filayo dhammaadka 2018 ama wax la mid ah.
Khadadka Istanbul ee ka gudbaya Bosphorus
Khadadka halista ah ee Istanbul (doomaha waaweyn ee doomaha caadiga ah), basaska badda (catamarans xawaare sare leh), ama doomaha gaarka loo leeyahay ee dhexdhexaadka ah ayaa safraya inta udhaxeysa dhinacyada Yurub iyo Aasiya ee magaalada. Isgoysku wuxuu qaadanayaa qiyaastii 20 daqiiqo wuxuuna ku kacayaa 3 TL, wuxuuna siinayaa aragtiyo wanaagsan Bosphorus. Mararka qaar doonta marki ay soo degto ayaa si lama filaan ah uga bood booda doonta, xitaa maalmaha xasiloonida. Tani waxay sababi kartaa inay dadku ku dhacaan haddii ay taagan yihiin, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa inaad fadhiso inta ay doontu istaageyso gabi ahaanba.
Istambuul, safafka ka imanaya meel kasta oo la geeyo guud ahaan waxay maraan waddo gaar ah, gaggagganna waxaa lagu calaamadeeyay 'X Iskelesi' ("X Landing stage / pier"). Tusaale ahaan, Eminönü kaligiis wuxuu leeyahay in ka badan 5 marxaladood oo ay ku degto (oo ay ku jiraan kuwa ay adeegsadaan doomaha kale marka laga reebo safafka), markaa haddii aad u socoto, dheh, üsküdar, waa inaad qaadataa doonta ka baxeysa 'Üsküdar Iskelesi'. Ku beddel 'Üsküdar' meesha aad dooratay.
Khadadka safarka Istanbul waxay ku safraan waddooyinka soo socda:
Üsküdar – Karaköy – Eminönü – Eyüp (Wadada Dahabiga Ah)
Istinye – Emirgan – Kanlıca – Anadolu Hisarı – Kandilli – Bebek – Arnavutköy – Çengelköy (Wadada Bosphorus oo dhan)
Eminönü – Kavaklar (Booqashada Gaarka ah ee Bosphorus, Waxaa Lagu Taliyay In Loo Dalbo Dalxiisayaasha)
Sirkeci – Adalar – Yalova – Cınarcık (Wadada Jasiiradaha Princes)
Intaa waxaa dheer, basaska-badda (baska badda) raac wadooyin isku mid ah (ama in ka badan), oo badanaa ka dheereeya safafka. Ku noqoshada Yenikapi oo ka timid Kadikoy by badda-baska waa hab dhakhso leh oo habboon oo looga gudbo Bosphorus; Yenikapi waxaa ku yaal istaan ​​tareen oo leh tareenno joogto ah oo taga Sirkeci / Eminönü goobta maqaayada kalluunka ee Yenikapi ayaa u dhow (ama hal meel oo tareenka laga istaago).
Afar weyn doon khaas ah marinnada safarka ee u dhexeeya Aasiya iyo Yurub waa:
Kabataş – Üsküdar (kudhow taraamka iyo nidaamka funicular ee Kabataş)
Eminönü – Üsküdar (wuxuu kudhowyahay taraamka Eminönü)
Eminönü – Kadıköy (wuxuu kudhowyahay taraamka Eminönü)
Aad bay faa'iido u leedahay doonyaha dheereeya (ku socda 55 km/h) oo ka socda dhowr meelood, sida Yenikapi - Yalova one, oo kuu oggolaanaysa (oo leh bas isku xira Yalova) inaad ku jirto Xarunta Bursa wax ka yar saddex saacadood. Qiimayaashu aad bay u sarreeyaan oo faa'iidada waqtigu waa mid aad u badan, in kasta oo aragtidu aysan u fiicnayn.
Doomaha oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay, ayaa lagu bixin karaa isticmaalka AKBIL / Istanbulkart nidaamka.
Basaska gaadiidka dadweynaha waxaa maamula ama kormeera İETT. Basaska dadweynaha ee Istanbul waxay ku yimaadaan midabbo iyo qaabab badan, laakiin waxa ugu muhiimsan ee maskaxda lagu hayo ayaa ah iibka tikidhada ee diyaaradda gabi ahaanba waa la joojiyay, marka waa inaad heshaa mid (ama istanbulkart, kaas oo laga aqbalo dhammaan hababka gaadiidka dadweynaha) ka hor inta aan baska la fuulan.
Nidaamka BRT ee aadka loo isticmaalo ee Istanbul, oo maxalliga ah loogu yeero Metrobus, waxaa u adeega basas dhaadheer oo isku dhaf ah oo ku socda waddooyinkooda gaarka ah ee ku teedsan gudaha magaalada, kana go'an dhammaan taraafikada kale sidaasna waqti badan ugu luminaya waddooyinka guud ahaan ciriiriga ah ee Istanbul. In kasta oo ay tahay xulasho gaadiid aad muhiim ugu ah dadka deegaanka, nidaamku wuxuu daboolayaa aagagga inta badan aysan booqan dadka safarka ah, inta udhaxeysa Beylikdüz the ee xaafadaha galbeed ee fog ee magaalada iyo Kadıköy ee dhanka Aasiya iyadoo la marayo Bakırköy, Cevizlibağ oo ka baxsan darbiyada hore ee magaalada una dhow Topkapı Gate , degmada ganacsiga Mecidiyeköy, iyo Buundada Bosphorus.
Inta badan khadadka basku waxay shaqeeyaan qiyaastii 06: 00-23: 59, badiyaa leh adeegyo la yareeyey 22:00 kadib. Khadadka qaar ee u dhexeeya Xarumaha waaweyn waxay shaqeeyaan 24/7 in kastoo, sida Metrobus, oo leh qiyaas saacad ah. Saqbadhkii ka dib, basaska ayaa ku baxa laba tikidhada qofkiiba halkii ka caadiga ahayd.
Khadadka Basaska Habeenkii:
Laba jeeg oo laga helo shabakadda İETT ayaa si xoog leh lagula talinayaa.
TH-1 Taksim - Madaarka Atatürk (ma shaqeeyo inta udhaxeysa 01:00 - 04:00)
E10 Kadikoy – Sabiha Gokcen International Airport
Dalxiis ahaan, waxaad u badan tahay inaad isticmaasho taraamka iyo metroga aagga Sultanahmet iyo Taksim maadaama aysan jirin khadad basas ah oo ka shaqeeya aaggaas mar dambe.
Basaska iyo gawaarida jidadka waxay u muuqdaan kuwo aad u camiran saacadaha ciriiriga, gaar ahaan Isniinta iyo Jimcaha. Taasi waxay sidoo kale u abuuri kartaa fursado jeebabka.
Tagaasida waa hab fudud oo jaban oo lagu wareego. Heerka bilowga waa 4 TL ka dibna 2.5 TL kiilomitir kasta kadib (Feb 2019). Fogaanta ilaa 2½ km waxay kuxirantahay qiimo go'an oo ah 10 TL, masaafadaas kadib mitirradu waxay ku socdaan heerarka kore. Safar hal dhinac ah oo ka yimaada Taksim Square ilaa Sultanahmet ayaa ku kacaya qiyaastii 20 TL. Gelinta guud ahaan looma baahna. Marar badan, darawalada ayaa diidi doona inay bilaabaan mitirka waxayna isku dayaan inay kala hadlaan qiimo go'an (tusaale 80 TL safar gaaban oo ka yimaada Yenikapı Terry Terminal ilaa Sultanahmet, oo ay ku kacayso wax ka yar 20 TL). Waa inaad iska ilaalisaa cabsidaas oo aad mid kale qaadatid maxaa yeelay hubaal waxaad ku dhamaan doontaa bixinta lacag badan. Si aad u hubiso, ka hor intaadan galin, kaliya weydii "intee in la aado…?" (darawalada badankood waxay fahmaan Ingiriisiga aasaasiga ah) maadaama qiimaha ay markaas sheegaan uu yahay mid sax ah. U sheeg markaa inay ku dhejiyaan mitirka cashuurta. Wadayaashu waxay si caadi ah ula shaqeeyaan casimiga, sidaa darteed layaabi maayaan gabi ahaanba markaad weydiisato inay ku dhejiyaan. Qiimaha dhamaadka wuxuu noqon doonaa mid aad ugu dhow midka ay kuu sheegayaan bilowga. Ma jiro qiima dheeri ah oo habeenkii ah.
Haddii aad xiriir internet ka leedahay laptop-kaaga ama aaladda gacanta, had iyo jeer isticmaal Calculator-ka Taksiga ee Istabul ka hor intaadan taksi ka raacin garoonka diyaaradaha, hudheelka ama maqaayadda Waxay kaa caawin doontaa inaad si fudud u qiyaasto qiimaha tagaasida iyadoo lagu saleynayo meelaha laga qaado iyo meelaha la dego meel kasta oo ka mid ah Istanbul, waxaad bixin doontaa dulmar ku saabsan safarka oo ka fogow khayaanada taksiyada ee dhici kara.
Xitaa markii la isku raaco in lagaa qaado mitirka, tagaasida magaalada Istambul waxay leeyihiin dhowr dooq si ay u qabtaan qofka socdaalka ah ee aan feejigneyn Mitirka ayaa inta badan ku ag yaal usha mareenka hortiisa darawalada ayaa si uun u maareeya in ay hormariyaan mitirka inta ay qalabka badalayaan. Inaad mitirka dib ugu celin sicirka bilowga, yacni kudarkaaga qiimaha kan hore, sidoo kale waa wax caadi ah. Tagaasida ku sugta meel u dhow istaanka basaska ama Yenikapı doomaha inta badan waa dabin dalxiis. Waxay bilaabayaan mitirka laakiin waxay kaa qaadayaan 20 TL ugu yaraan. Ku adkee darawalka inaad adigu bixin doonto qiimaha mitirka ka hor intaadan soo galin. Ha iibsan xeeladooda degdegga ah ee lagu iibiyo. Had iyo jeer isku day inaad joojiso taksi wadada ku maraya ama aad hesho joogsi taksi oo sharci ah.
Ku adkeyso inaad aado meesha aad rabto maxaa yeelay darawalada qaarkood waxaa la siiyaa guddi mar kasta oo ay qof u geeyaan hudheel gaar ah, makhaayad, dukaan, iwm.
Tagaasida Istambul waa midab jaalle ah ama midab leh Taargooyinka tagaasida huruudda ah waxay ku bilaabantaa 34 T halka midka maroonkuna uu ku bilaabmayo 34 M. Tagaasida huruudda ah ayaa aad u badan, maadaama kuwa maroonku ay inta badan ka shaqeeyaan agagaaraha xaafadaha galbeedka. Ma ka soo qaadi karaan safrayaasha gobolka tagaasida jaallaha ah iyo taa beddelkeeda.
Ka taxaddar qoraalada aad ugu dhiibayso lacag bixinta; darawalada qaar waxay isku dayeen inay iska dhigaan in warqada 50 TL ee gacanta loo galiyay ay ahayd kaliya 5 TL note. Mararka qaarkood darawallada tagaasida ayaa runtii laga yaabaa inay sidoo kale jeexjeexaan qoraalada aad siiso, oo ay kuu sheegaan inaysan fiicnayn, si ay kaaga dhigaan inaad u dhiibto 50 TL note. Marka, hubso in qoraalada aan la jeexjeexin, oo runtiina ay tahay mid sax ah intaadan wareejin. Sidoo kale, haddii aadan aqoon u lahayn magaalada darawal taksi ayaa laga yaabaa inuu wado kale u maro si uu lacag dheeraad ah kaaga qaado.
Muhiimadda rideshare shirkaduhu waa Uber, Bitaksi (tan ugu raqiisan), iyo iTaksi (kan ugu qaalisan, sidoo kale dad badan ayaa ka cawda darawallada khiyaamada).
Gaadiidku aad ayuu u xumaan karaa, saacad ayuu ku qaadan karaa dhowr kiilomitir magaalada hore. Waxaa laga yaabaa inaad ka fiicnaan laheyd inaad metro-ga ka baxdo magaaladii hore ka dibna taksi aad ka tagto.
Qaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ee masaafooyinka leh iyo tikidhada tagaasida lagu qiyaaso waa:
Madaarka Ataturk (IST) - Fagaaraha Taxim ~ 21 km
Madaarka Ataturk (IST) - Sultanahmet Square (Old City) ~ 18 km
Fagaaraha Taxim - Sultanahmet (Old City) ~ 5.5 km
Gegada Diyaaradaha Sabiha Gokcen (SAW) - Kadikoy (Chalcadonia) Terminal Terry-ka ~ 36 km
Esenler (Terminal Bas) - Topkapı Palace (Sultanahmet) ~ 10.5 km
Esenler (Terminal Bas) - Madaarka Ataturk (IST) ~ 15 km
Taksi la wadaago
La buuxiyay (Turki: "buuxa") waa taksi la wadaago, oo ku socdaalaya waddo go'an, taas oo kharashkeedu ka badan yahay basaska magaalada laakiin ka yar tagaasida caadiga ah. Waxay qaadi karaan ilaa 8 rakaab ah. Way fududahay in la aqoonsado, maxaa yeelay sidoo kale waxay leeyihiin rinji huruud ah sida taksi ahaan waxayna wataan a La buuxiyay saxiix dusheeda Waxay kaliya bilaabi doonaan wadista marka sideedii kursi ay buuxsamaan, taas oo sidoo kale ah meesha magaca ka soo jeedo.
Wadooyinka ugu muhiimsan uguna muhiimsan ee dolmuşes waa:
Taksim – Eminönü (Taksim istaago, oo u dhow Xarunta Dhaqanka ee Atatürk, fagaaraha Taksim)
Taksim – Aksaray (Taksim stop, Tarlabasi Avenue, oo u dhow fagaaraha Taksim)
Kadıköy – Bostanci (joogsiga Bostanci, hortiisa dekedda doonta Bostanci)
Taksim – Tesvikiye (Taksim istaag, hortiisa Patisserie Gezi, fagaaraha Taksim)
Beşiktaş – Nisantasi (Beşiktaş joogso, ka hor Beşiktaş - Üsküdar ferry port)
Kadıköy – Üsküdar (Üsküdar stop, Near the Üsküdar - Beşiktaş iyo Üsküdar - Kabataş dekedda doonta)
Haddii aad rabto darawalka inuu istaago, waad dhihi kartaa Cenecek var. (Dagaal-EE-neh-djek! - Qof ayaa soo baxaya.) Ama Müsait bir yerde. (mU-sa-EEt bir yer-deh. - Meel ku habboon.)
Socotada naafada ah
In kasta oo dhismayaasha joogtada ah iyo dib-u-habeynta meelaha lugeynaya ay waddooyinka magaalada ka dhigayaan kuwo si adag u adag oo ay kula gorgortami karaan dadka curyaamiinta ah, haddana maamulka gaadiidka dadweynaha ee magaalada ayaa qaaday tallaabooyin ay ku dejinayaan.
Laamiyada hareeraheeda wadooyin badan oo waaweyn oo kuyaala aagagga dhexe, iyo sidoo kale isgoysyada dadka lugaynaya, ayaa lagu rakibay laamiyo taatiko ah. Laydh badan oo taraafikada dadka lugaynaya ayaa sidoo kale cod ku gaadhsiiya (oo kaliya afka Turkiga, in kastoo).
Hawsha beddelka basaska duugga ah iyo kuwa cusub oo ay heli karaan dadka isticmaalaya kursiga curyaamiinta ayaa socda. Basas badan oo khadadka dhexe ku yaal ayaa leh dabaq hoose iyo jaranjaro lagu rakibay (la tasho darawalka si uu baska ugu foorarsado dhulka agtiisa, inuu furo jaranjarada, iyo inuu ka caawiyo baska, in kasta oo mid ka mid ah nasiib daro aan macquul aheyn inta lagu jiro saacadaha ugu badan ee istaaga intaba. Ka fikir baska sardine ka buuxay oo soo dejinaya dhamaan rakaabkiisa si uu hoos ugu fooraro).
Shaashadaha LCD waxay muujinayaan magacyada joogsiga inta ay u dhow yihiin joogsiga iyo ogeysiisyada codka ayaa la sameeyaa.
Gawaarida waa la heli karaa dadka isticmaalaya gawaarida curyaamiinta ee ka imanaya istiraatiijiyada saldhigga oo hooseeya kuna qalabeysan marinno jilicsan oo ka soo jeeda heerka waddada (ama wadada).
Dhammaan idaacadaha waxaa loogu dhawaaqayaa bandhig iyo cod ahaan taraamyada.
Ku dhowaad dhammaan saldhigyada nidaamka mitrooga ee Istambul waa loo heli karaa dadka isticmaalaya kursiga curyaamiinta, iyadoo wiishka / wiishashka hoos loo dhigayo ama illaa laga gaadhayo jaangooyooyinka laga soo bilaabo heerka waddada ee laga heli karo meelaha laga soo galo xarunta. Dhamaan nidaamka, tareenada ayaa si fudud looga heli karaa boosteejooyinka saldhigga. Caawinaad, ka raadi ilaalada ku labbisan dareeska midabka midabka madow / madow ee u dhow irdaha laga galo xarunta.
Dhammaan idaacadaha waxaa lagu dhawaaqayaa cod tareenka dhulka hoostiisa mara. Khadadka badankood sidoo kale waxaa lagu shaaciyaa bandhig, laakiin laguma dhawaaqo tareenada duugga ah ee M1A / M1B. Taabadalkeed, waa inaad fiirisaa astaamaha saldhigyada, kuwaas oo waaweyn oo caadi ku filan.
Inta badan saldhigyada mitrooga waxay leeyihiin tilmaamayaal dusha sare oo la ogaan karo oo hagaya dadka aragga naafada ka ah ilaa heerka waddada ilaa mid ka madal.
Iyada oo taariikh dheer ku leh Xarunta boqortooyooyinka, Istanbul waxay bixisaa meelo badan oo taariikhi ah iyo meelo diimeed oo la qaadan karo. Hagia Sophia, Aqalka Topkapı, Masaajidka Sultanahmet (Masaajidka Buluuga ah, bilaash), iyo Godka Basilica waxay ku hareeraysan yihiin Fagaaraha Sultanahmet, halka qaar kalena ay ku kala firirsan yihiin jasiiraddii magaalada hore, sida Kaniisadda Badbaadiyaha Quduuska ah ee Chora (Kaariye Müzesi), gabi ahaantiis gudihiisa waxaa ku daboolan qurxinta maskaxda iyo mosaicsiyada. Waa qayb cajiib ah oo inta badan aan badnayn Darbiyada Theodosia, oo calaamadeysa dhererka buuxa ee soohdinta galbeed ee jasiiradda, wuxuu ku ag yaal kaniisaddan gaarka ah.
Waqooyiga gacanka magaalada jir, guud ahaan geesta dahabiga ah, waa Galata, oo loo caleemo saaray Tower Galata. Istambuul Casri ah, oo leh bandhigyadeeda farshaxanka casriga ah ee Turkiga, wuxuu ku yaal hareeraha biyaha ee Karaköy. Aragtida kale ee degmada, oo woqooyi ka xigta Tower, waa matxafka laga beddelay ka Hoolka Dervish ee Suufiyada Mevlevi amar, kuwaas oo kuwa xiiseynaya waxbarista Rumi ay rabaan inay fiiriyaan. Woqooyi dheeraad ah waa Wadada Istiklal, Wadada lugta ah ee caanka ah ee Istanbul ee ka socota agagaarka Galata Tower ilaa Taksim Square, oo ah bartamaha magaalada oo dhan.
U jihada dhanka galbeed halkii aad ka tagi laheyd waqooyiga magaalada hore waxay kuu keenaysaa qoto dheer bangiyada daarta Golden Horn. Xaafad laga yaabo in sifiican loogu soo booqdo halkan waa Eyüp, oo lagu soo booqdo magaalada Xaramka Islaamka ugu karaamada badan iyo, iyadoo dadka diinta leh oo dhan ay ku meeraysanayaan hareeraha jidadka yar yar ee loo maro dhagaxyada iyagoo cimaamadooda iyo wixii aan ahayn, si ay u arkaan waxa nolol maalmeedka Cusmaaniyiinta Istanbul noqon karaa sida. Xeebaha gees ka gees, Sütlüce waa Miniaturk, Beertii ugu horeysay ee gaagaaban ee magaalada, oo leh moodooyin ka soo jeeda Boqortooyadii hore ee Cusmaaniyiinta.
Waqooyiga Fagaaraha Taksim waa New Istanbul, oo ah degmada ugu weyn ee ganacsiga magaalada. Haddii aad u jiheysato jihadaas, ha ilaawin inaad iska hubiso Matxafka Milatariga, halkaas oo riwaayadaha miyuusigga milatariga ee Cusmaaniyiinta (Mehter) waxaa la qabtaa galab kasta. Inta badan jaranjarooyinka magaalada waxay ku yaalliin woqooyiga degmadan, agagaarka Levent iyo Maslak, oo leh muuqaal gebi ahaanba ka duwan kan magaalada hore. Si kastaba ha noqotee gaadhitaanka koonfurta ee isla degmadaas ayaa xoogaa ganaax ah neo-Classical iyo Dhismooyinka Art Nouveau laga soo bilaabo bilowgii qarnigii 20aad, agagaarka xaafadaha Osmanbey, Kurtuluş, iyo Nişantaşı. Wax yar ka bari halkan, waxoogaa hoos u dhac ah oo xagga sare ah markaad u soo dhowaato xeebta, waa bangiyada Bosphorus, oo ay ku hareereysan yihiin xaafado qurux badan oo ay ka buuxaan guryaha waaweyn ee biyaha laga dhaansado (Waterside) iyo tiro biyo-mareen ah qasriyada halkaas oo aad ku qancin karto waxa lacagtu iibsan karto waqtiyadii tagay.
Bosphorus dhankeeda bari waa dhinaca Aasiya, Waxay ku taal agagaarka degmooyinka taariikhiga ah ee Kadıköy iyo Üsküdar, waxaana laga yaabaa inay ugu fiican tahay astaanta Tower-kii Gabadha, oo ku taal qiyaastii kalabar u dhexeysa degmooyinkaas, oo ku taal xeebta xeebta ka baxsan. Bosphorus iyo Marmara xeebtaan kalabar magaalada waxaa lagu gartaa wax aad u wanaagsan xaafado qurux badan, waa la iska indhatiray Buurta Çaml Hillca, mid ka mid ah buuraha dhaadheer ee magaalada oo waliba leh aragti in badan oo magaalada intiisa kale ah, oo leh makhaayad iyo baarkin wacan oo ku yaal dusheeda.
Koofur-bari magaalada, xeebta koonfureed ee Aasiya Sideed waxaa ku yaal Jasiiradaha Princes, jasiirado ka kooban sagaal jasiiradood oo aan baabuur lahayn, oo lagu garto qurux badan guryo alwaax ah iyo geedaha geed.
Muddo dheer ayaa la iska indho tiray macnaha xun ee ay la leeyihiin xilligii Tulip ee 1700s, oo ah xilli soo bandhigid iyo xaflado qaali ah oo ay wadaan hay'ad dawladeed iyadoo lagu dhex jiro beero waaweyn oo ay ka buuxaan tulips (iyo sidoo kale markii nalalka ugu horreeyay la keenay Netherlands ee laga keenay Istanbul, jidka agtiisa), taas oo markii dambe lagu eedeeyay burbur dhaqaale iyo ugu dambayntii kala-taggii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, tulips waxay dib ula soo noqdeen wax badan oo caan ah oo ay ahaayeen tobankii sano ee la soo dhaafay waxayna hadda u shaqeeyaan nooc ka mid ah calaamadaha Istanbul iyo Turkiga oo dhan. Waxay ubaxaayaan dhammaadka Maarso illaa horraantii Maajo (sharadka ugu fiican waa horaantii illaa bartamihii Abriil) iyo in kastoo lagu arki karo waddooyin badan oo magaalada ah meel kasta oo ay jirto meel bannaan oo ku filan oo laga beero dhinacyada iyo dariiqa dhexe ee wadada, haddii aad tahay ka dib markaad bogaadiso ama / ama sawir ka qaaddo qaybo badan oo tulips ah oo leh noocyo qalaad, u gudub Sultanahmet Park iyo Gülhane Park oo ku taal Sultanahmet; Beerta Emirgan oo u dhow xaafadda Bosphorus ee woqooyiga Emirgan; ama Çamlıca Hill ee Aasiya Side.
Booqasho a qubeyska (Qubayska Turkiga) waa qayb muhiim u ah safar kasta oo aad ku tageyso Istanbul waana wax aad hubin doonto inaad ku celiso ka hor intaadan bixin. Waxaa jira ugu yaraan mid taariikhi ah qubeyska xaafad kasta oo Istanbul ka mid ah. Ka taxaddar xulashada xamaam, maadaama ay aad ugu kala duwanaan karaan nadaafadda. Meelaha badankood waxay bixin doonaan xoqin iyo / ama duugis. Kaliya inaad ku jirto Hombori (sida sauna oo kale), waa ku filan tahay aragtida iyo la-qabsiga meesha, laakiin xoqitaanku waa waayo-aragnimo weyn. Duugistu maahan mid kafiican tan laga helo wadamada reer galbeedka.
Sultanahmet wuxuu leeyahay hamams taariikhi ah. Qaarkood aad ayay u xad-gudbaan waxayna u adeegaan dalxiisayaasha.
Nargile (hooka / tubbada biyaha)
Beri hore, nargile, ama beebkii biyaha ee Turkiga, wuxuu ahaa Xarunta nolosha bulshada iyo siyaasadda Istanbul. Maanta qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa wali u arka inay tahay mid ka mid ah raaxooyinka nolosha ee waa wax xiiso leh in la isku dayo. Inta badan meelaha aad ku cabbi karto maandooriye waa Yeniçeriler Caddesi, oo u dhow Kapalı Çarşı (Grand Bazaar). Çorlulu Ali Paşa iyo Koca Sinan Paşa Türbesi labaduba waxay ku sugan yihiin maxkamado gudaha ah oo cidlo ah, oo ku yaal geeska qaar ka mid ah deyrarka qabriga, halka Rumeli Kahvesi ay dhab ahaantii ku jirto xabaalaha qadiimiga qadiimiga ah, in kasta oo aysan ahayn wax qallafsan sida aad u malayn karto. Koonfurta Sultanahmet, oo u dhow badda, waxaa ku yaal Yeni Marmara (Çayıroğlu Sokak), halkaas oo aad sidoo kale ku fariisan karto barxadda oo aad ku raaxeysan karto aragtida. Beyoğlu, Ortakahve (Büyükparmakkapı), waxaa jira xitaa xulasho dhadhan kala duwan.
Aag kale oo leh meelo yar oo qurux badan oo qurux badan waa Rıhtım Caddesi, oo u dhexeeya buundada Galata iyo Matxafka casriga ee Istanbul.
Matxafyada iyo wixii la mid ah: Haghia Sophia, kadib waxay u gudubtay Matxafka Topkapı (labadan waa inay qaataan ugu yaraan seddex ilaa shan saacadood), waxaana doorbidaya wadada gadaasha dambe ee Haghia Sophia, halkaas oo ay ku yaalliin guryo si wanaagsan loo soo celiyay. Kadib u gudub Masjidka Buluugga ah iyo fagaaraha ay ku dhegan yihiin alwaaxda (At Meydani). Dhinaceeda waxaa ku yaal Matxafka Farshaxanka Islaamka ee aadka u wanaagsan. Wax yar u dhaadhac oo hel Haghia Sophia-ka yar oo leh beerteeda wanaagsan (waxay ku jirtay dib-u-soo-celin, laakiin waxaad u badan tahay inaad geli karto). Kadib u kac xagga dhismaha masaajidka Sokollu Mehmet, dusha sare dusha sare ee gudaha.
Tareen ama lugo ku tag Eminönü (halkaas oo ay doonyuhu uga baxaan safarada Aasiya ama Bosphorus). Booqo Masaajidka Cusub ee ku yaal dhabarka, ka dibna Bazaar Masaarida ah ee ku xigta, oo aad u sii socoto jihadaas, ka hel masaajidka Rüstem Pasha oo leh shaashado aad u fiican. Waxay ku taal meel sare oo u dhow suuq dhar duug ah, waxaa laga yaabaa inaad weydiiso tilmaamaha. Ka dib raac tag ama ka raadi bas masaajidka Eyüp masaajid ahaan, hal mayl ama saddex kor u kaca Geeska Dahabiga ah. Ku soo booqo dhismahan Eyüp waqtigaaga firaaqada ah (masaajidka ma ahan mid gaar ah, maxkamadda ayaa ah, iyo qulqulka mu'miniinta, oo ay ku jiraan wiilal badan oo la-gudayo); Jimce ayaa laga yaabaa inay tahay maalin wanaagsan oo sidan la sameeyo). Ka dib, haddii aad adkeysi leedahay, way fiicnaan kartaa inaad dib u socotid sidoo kale; laga yaabee in loo socdo (8 km ama wax la mid ah), laakin waddo loo maro qeyb ka mid ah darbiga magaalada oo marka hore la aadayo Kaniisadda caanka ah ee Kaariye oo leh mosaasadeeda, ka dibna loo sii socdo Masjidka Selimiye oo leh aragti weyn oo ku saabsan Dahabiga Dahabiga ah (iyo masaajid wanaagsan lafteeda), ka dib Masaajidka Faatix (oo maraya xaafado aad u diin iyo nolol wanaagsan), ka dibna loo sii waday masaajidka Sehzade oo si wanaagsan loo soo celiyay, iyo Süleymaniye agtiisa (ha ilaawin inaad ku raaxaysato aragtida dhinaca gees geeska). Haddii xoogaa xoogaa kuu hartay, waxaa laga yaabaa inaad u gudubto dhismaha Jaamacadda, markaasna waxaad aad ugu dhowdahay masaajidka Beyazit. Suuqa buugaagta (way yar tahay) ayaa ka dambeeya masaajidkan wanaagsan, ee aan caadiga ahayn (daaradda fiican).
Mar labaad u tag Eminönü, laakiin markan doonta (doomaha waaweyn) u qaado Üsküdar. Waad iman doontaa kahor masaajid wanaagsan oo ku yaal hore, mid kale oo 400 mitir u jira dhinaca midig, in yar oo gudaha ka dambeeya wareegga taraafikada, iyo mid saddexaad, oo aad u yar, xagga hore ee badda. Eeg suuqa oo fidsan gudaha, soco oo ha ilaawin inaad ku socoto xeebta, laga yaabee inaad ku cunto kalluun kalluumeysi mid ka mid ah doomaha qulqulaya. Tani waa booqasho wanaagsan galabtii, fiidkii hore, oo ka qaxaya magaalada. Waxaa ku soo biiri doona kumanaan dad ah oo guryahooda ka tagaya "magaalo" laakiin wadada dib ugu noqoshada waxay ku socon doontaa doon yar oo faaruq ah. Inta jeer ee doomaha ayaa hoos u dhacaya fiidkii, markaa hubi inuu jiro xiriir.
Tag saldhiga tareenka oo ka raadi tareenka magaalada 'Sirkeci-Halkali', oo ka bax (xusuusta, saldhigga Yedikule). Waxaad aad ugu dhowaan doontaa Yedikule, oo ah qalcad wanaagsan, waxaadna yeelan doontaa aragti wanaagsan oo ku saabsan derbiyada magaalada. Tareenadu way baxaan 15kii daqiiqo ee kasta ama wixii la mid ah, raaciddu waa mid gaar ah (maaddadu way xun tahay, laakiin haddii aad nasiib leedahay joogsi kasta oo labaad oo joogsade kale ayaa galaya oo isku dayaya inuu alaabtiisa iibiyo, waa wax lagu farxo). Socdaalku wuxuu qaadanayaa meel kasta oo ka bilaabaneysa labaatan daqiiqo illaa nus saac. Tani ma aha "waajib", laakiin waxay noqon kartaa madadaalo weyn.
Waxaad ku seegi doontaa bajaajka daboolan intaan oo dhan. Taasi waa sababta oo ah waxaad halkaas ka heli doontaa si kasta. Hadaad tagto Beyazit iyo suuqa buugaagta waxaad kudhowaad tahay labo kamid ah marinkeeda badan. Isku day oo hel Masjidka Nuruosmaniye iyo dhismihiisa dhinaca kale, waa u qalantaa. Ka dib markaad sahamisay qaybta daboolan, qaado socod nasasho ah oo hoose, dhanka jihada guud ee Eminönü, halkaas oo ay ku taal “baado aan qarsooneyn” oo dhan. Ka gudub buundada Galata si aad wax uga aragto dhinaca woqooyi (tusaale ahaan qaado "tünel" teleferik oo fuula buurta inteeda badan (irridda u dhow dhinaca ka soo horjeedka buundada Galata, weydii agagaarka)), ka dibna sii wad Taksim. Dukaammadu waa noocyo caalami ah.
Darbiyada Theodosian Socodka
Qayb dib loo soo celiyey oo ka mid ah darbiyada magaalada at Belgradkapı Gate, wuxuu kudhowyahay xeebta Marmara
Laga soo bilaabo 408 CE derbiyadii asalka ahaa ee Constantine waxaa lagu beddelay xukunkii Theodosius. Gidaarradan ayaa markaa noqday barta halista ah ee difaacidda caasimaddii Boqortooyadii Bariga ee Roomaanka iyo kuwii ka dambeeyay Ottoman. Weli way ku dhow yihiin dhammaantood, iyagoo calaamadeeyay xadka galbeed ee jasiiradda Old City, iyadoo qaybo ka mid ah ay ka cabanayaan dib u soo celin aan fiicnayn oo la qabtay horaantii 1990-meeyadii. Qaybta ku xeeran Iridda Topkapı (oo aan lagu qaldin Topkapı Palace oo ku taal meel gebi ahaanba ka duwan) waxaa si fudud looga heli karaa xarunta taraamka ee Pazartekke, oo ku taal meel qiyaastii 300 m dhinaca bari ka xigta derbiyada. Qeybaha fogfog qaarkood ma noqon karaan kuwo aad u ammaan badan waxayna u baahan karaan taxaddar yar.
Socod 7-km ah oo soconaya iyo qeybahan hartay ee darbiga magaalada waxay daaqad ka siinaysaa qadiimiga waxayna culeys saareysaa dhaxalka taariikhiga ah ee taariikhiga ah ee Turkiga. Soo dejiso oo daabac sharaxaad cilmiyeed iyo farsamo ee darbiyada intaadan booqan Istanbul; tani hubaal waxay ku kordhin doontaa raaxada. Ka soo baxa Eminönü, u qaado Doonta Dahabka Dahabiga ah ee Ayvansaray. Terminalka tareenka wuxuu ka duwan yahay boosteejooyinka Bosphorus ee ku dhagan iyo bariga Buundada Galata. U soco galbeedka dhanka buundada Galata ee hoos marta, ka dibna sii mar boosteejada basaska ilaa wadada haadka lugaynaya ee aada dhismaha yar ee terminal-ka. Qiimaha waa 1.50 TL. Doomaha ka tag Ayvansaray oo u gudub baarkinka derbiga dhinaca kale ee wadada weyn. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad kor u kacdo derbiga dibedda ama gidaarka gudaha laakiin marin u helka dusha sare ee dagaalku badanaa wuxuu ku yaal gudaha si dabiici ah oo ku filan, sidaa darteed u soco wadada yar ee wadada dhinaceeda ah oo gadaal ka jaraysa gidaarka iyo munaaradaha gadaashiisa. Halkan waxaad ku kori kartaa qaybtaan darbiga aan xakamaynta lahayn ee ku dul burbureysa lebenka iyo dhagaxa isla markaana aad ku sii wadi kartaa boqollaal daaradood oo fuulaya sida loogu baahdo. Jidkani wuxuu ku yimaadaa dhammaad muuqda oo mid baa lagu gaabin karaa wadada. Mararka qaar waxaa jira guryo iyo shirkado ganacsi oo si adag derbiga uga soo hor jeeda, mararka qaar bakhaarka basaska, qashin qubka ama badiyaa wadada. Darbiyadaas waxay badaleen derbiyadii hore ee Constantine sanadii 408 CE kadib markii ay soo mareen casriyeyn joogto ah iyo dayactirka burburka dhulgariirka. Shaqadii kala duwanayd ee la qabtay qarniyo badan waxay ahaayeen dhamaan qaabab iyo tayo kaladuwan. Si la yaab leh waxaa jira tiro wadooyin yar yar ah oo wali isticmaalaya albaabbada cidhiidhiga ah. Hoca Çakır Cd mid baa ka imanaya qayb la soo celiyey oo gidaarka ka mid ah halka sare ee jaranjarooyinka laga soo galo (isgoyska Hoca Çakır Caddesi iyo Kaariye Bostani Sokak), qaarna dusha sare ee derbiga dusha sare. Dib u soo celintaan laga soo bilaabo 1980-yadii waxay khilaafsan tahay tii hore. Darbiga ayaa markaa loo jabiyey wadada weyn ee Fevzi Paşa Cd. Ka gudub tan kuna sii wado darbiga gadaashiisa dambe. Raadi xirmooyinka cagaha iyo jebinta darbiga taas oo u oggolaaneysa marin iyo muuqaal wanaagsan hareerahaaga. Darbiga ayaa mar kale loo jabiyey Adnan Menderes Blv (si aan rasmi ahayn oo si weyn loogu yaqaan Vatan Street). Halkaan mar hore halkan ka daawo si cad si toos ah xariiqda laba-geesoodka ah ee difaaca leh dusha sare. Jebinta xigta waxaa loogu talagalay Turgut Özal Cd (si aan rasmi ahayn oo si ballaaran loogu yaqaan Meelaha Millet) kaas oo martigaliya qadka taraamka oo dib ugu laabanaya Sultanahmet kuwa uumiga ka dhamaaday. Hadda ku socda bannaanka gidaarrada, jajabyo kala duwan oo derbiga dibedda ah ayaa u oggolaanaya marin -u -helidda iyada oo loo marayo shaqo jaban ama waqti dambe iyada oo loo marayo jaangooyooyin casri ah oo burbursan. Darbiyada dhexdooda waxaa ku yaal caddaynta murugada leh ee tirada dadka hurdada adag ku haya Istanbul. Ku adkee joogitaanka derbiyada dhexdooda maxaa yeelay goor dhow waxaad imaan doontaa mashruuc dib -u -dhis oo aan nadiif ahayn oo ku yaal iridda Mevlanakapı Cd. Galitaanka munaaradaha iridda ayaa laga xiray albaabka, sidaa darteed gelitaanku waa darbiyada oo keliya. Laga soo bilaabo halkaan waxaa ka wanaagsan in lagu sii socdo darbiyada bannaanka maxaa yeelay beeraha suuqyadu waxay fadhiyaan godadka, dhinaca magaaladuna waxay burburiyaan dhismayaasha. Labadan kiiloomitir waxay siin doonaan aragti dheeri ah oo ku saabsan burburkii waqtiga iyo dhulgariirkii darbiyada. Ugu dambayntii waxaad imaan doontaa Albaabka Dahabka ah iyo Qalcadda Yedikule oo ka soo hor jeedda Badda Marmara waxayna ahayd barta guusha ee Byzantium. Tani waxay ku jirtaa xaalad aad u wanaagsan ugu yaraan maxaa yeelay Ottomans -ka ayaa casriyeeyay ka dibna si sax ah u isticmaalay illaa qarnigii 19aad. Lacag gelitaan ayaa jirta oo waxay leedahay musqul. Darbiyada dhaadheer iyo munaaradaha dhammaantood waa la heli karaa, oo minaarad weli waxay leedahay dabaqyo alwaax gudaha ah. Markaa waxaad hadda sahamisay darbiyada dhulka ee ilaaliya kaas oo ilaaliyay Byzantium iyo Boqortooyadii Roomaanka ee Bari sanadahaas oo dhan ka dib dhicitaankii Rome, oo ay jebiyeen kaliya Saliibiyiinta 4aad iyo Cusmaaniyiinta. Ka warran mustaqbalkooda? Marka la eego in shaqada dib -u -soo -kabashada ee dhowaan la tuhunsan yahay ay aqoonyahannadu u malayn karaan inay ka fiican tahay in laga tago. Hadda ku soo noqo magaalada midkood baska Eminönü (#80) oo ka soo baxa barxadda tuulada ee ka baxsan albaabka weyn, halkaas uun ku sug, ama ku soco Yedikule Istasyonu Cd qiyaastii 300 m ilaa khadka tareenka ee Sirkeci, labaduba waxay u socdaan Xarumaha u dhow Sultanahmet .
Maraakiibta Bosphorus-ka ee caadiga ah
Aragtida Habeenkii ee Shuhadada 15 Luulyo Bridge
Laga soo bilaabo terminalka isla markiiba bari ee Buundada Galata waxay ka bilaabaneysaa doonta weyn ee u socota Anadolu Kavagi ee iridda woqooyi ee Bosphorus ilaa Badda Madow iyada oo loo marayo joogsiyo kala duwan. Qiimaha waa 25 TL. Waqtiga bixidu waa xilli hore waana mid caan ah, markaa goor hore imow oo safka gal. Dabaqadaha furan ayaa si weyn caan u ah, sidaa darteed mooyee haddii aadan lahayn kursi ka baxsan ka filo dadku inay hareerahaaga oo dhan istaagaan oo aragtida isku koobaan. Doonta ayaa saacado ku sugeysa Anadolu Kavagi sidaa darteed markii aad dagto waxaa kaa hor imanaya maqaaxiyo badan iyo kuwa wax buufiya. Marka hore socod ku tag Yoros Kalesi, oo ah qalcad istiraatiiji ah oo indha indheysa oo koontarooleysa soo gelitaanka Badda Madow. Qalcaddan muhiimka ah oo leh aragti amar ayaa la dagaallamayay sannado badan waxaana ugu dambeysay adeegsiga qarnigii 19aad. Waxay ku dhacday burburin daran, laakiin xardhashada masiixiga wali wey ka muuqataa dhagaxa. Waxaa jira makhaayado run ahaantii ku yaal agagaarka qalcadda oo dabiici ahaan waxay leeyihiin aragtiyo cajiib ah. Waqti badan ayaa ka haray si aan ugu soo noqnoqdo tuulada si aan u qado. Waa xilli dambe oo galab ah ka hor intaanan ku soo laaban Eminonu, laakiin maalin si fiican loo qaatay. Beddelka dalxiis ee Bosphorus ee ka jaban oo dhakhsaha badan waa safar 10-TL ah oo safar gaaban ah.
Istanbul waxay leedahay shan naadi oo ka ciyaara Süper Lig, heerka ugu sareeya xiriirka kubada cagta Turkiga: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir iyo Kasımpaşa. Saddexda hore waxay had iyo jeer ku jireen heerka sare waxayna leeyihiin sumcad caalami ah. Tartanada udhaxeeya dhinacyadan waxaa lagu hor ciyaaraa dad aad u fara badan oo xisbiyada ka kala socda; helitaanka tigidhada waxay u baahan tahay habka horay loogu sii ballansado. Maaddaama jawigu aad u neceb yahay kooxaha martida ah, daawadayaashu waa inay iska ilaaliyaan xirashada midabada kooxda marka ay ciyaartu dhammaato, oo ay ka fogaadaan wax astaamo ah oo muujinaya dhibaato dadweyne
Beşiktaş JK wuxuu ku ciyaaraa Vodafone Park, garoon qaada 41,903. Waxay ku taal daanta Yurub ee Bosphorus oo ku xigta Qasriga Dolmabahçe, 1 km bari ka xigta saldhigga mitrooga ee Taksim.
Fenerbahçe SK ayaa ku ciyaareysa 47,834 oo qaadi kara Şükrü Saracoğlu Stadium. Waxay ku taal bangiga Aasiya ee Bosphorus, 1 km bari ka xigta Kadıköy metro station iyo doonta quus.
Galatasaray SK ayaa ku ciyaareysa 52,332 oo qaadi kara Türk Telekom Stadium oo ku yaal cirifka woqooyi ee istanbul istanbul, metro ilaa Seyrantepe.
Başakşehir FK wuxuu ku ciyaaraa garoonka 17,319-awood u leh ee Fatih Terim. Waa waddo dheer oo laga baxo cidhifka woqooyi-galbeed ee magaalada, 1 km woqooyi woqooyiga Metrokent oo ku taal khadka M3.
Kasımpaşa SK wuxuu ku ciyaaraa garoonka 14,234 ee qaada Recep Tayyip Erdoğan Stadium, degmada Beyoğlu oo woqooyiga ka xigta Dahabiga Dahabiga ah. Waxaa loogu magac daray Madaxweynaha hadda ee Turkiga, kaasoo ku soo koray meel u dhow isla markaana kubbadda cagta ku ciyaaray yaraantiisii.
Garoonka qaranka ee Turkiga waa Atatürk Olympic Stadium (Garoonka Ataturk Olympic Stadium), oo ah garoon qaada 76,000 oo ku yaal cidhifka galbeed ee magaalada, isticmaal Olimpiyat ama Olimpiyat Parkı metro station midkood. Ma lahan koox degan, laakiin dhowr naadi ayaa halkan waqti ku soo maray markii garoonkoodii aan la heli karin. Waxaa jira qorshayaal lagu ballaarinayo ilaa 92,000 oo awood iyadoo laga saarayo wadada orodka, laakiin tani waxay soo afjari doontaa rajada ay ka qabto Olimbikada
Ajnabi badan oo booqanaya ama ku nool magaalada Istanbul ayaa go’aansada inay si rasmi ah ugu bartaan luqadda Turkiga.
Qaar ka mid ah iskuulada luuqada Turkiga ee ugu weyn uguna xushmada badan magaalada Istanbul waa:
ITI Istanbul gudaha 4.
EFINST Xarunta Turkiga gudaha 1. Levent.
Miiraha gudaha Gümüşsuyu.
Tömer, Jaamacadda Ankara oo xiriir la leh.
Afkaarta Fikradda gudaha Etiler.
Jaamacadda Boğaziçi. Waxay socotaa koorso luqadeed Turki ah oo xagaaga ah oo deg deg ah oo heerar walba leh.
Labada jaamacadood ee Boğaziçi iyo Bilgi University labaduba si wanaagsan ayey u dhisan yihiin Baro Abroad barnaamijyada Ingiriisiga loogu talagalay ajaanibta.
Ajnabi badan oo ku nool Istanbul waxay isku taageeraan barashada Ingiriiska. Helitaanka shaqo wanaagsan oo barashada badanaa way fududahay shahaado la aqoonsan yahay sida kuwa hoos ku xusan:
ITI Istanbul ee 4. Levent waxay qabataa koorsooyinka CELridge University iyo CELTA sanadka oo dhan
Haddii aad horay ugu hadasho afka Turkiga, Cusmaaniyiinta Turkiga sidoo kale waxay noqon kartaa mid xiiso leh in la barto. Turkigii Cusmaaniyiinta wuxuu ahaa qaab maxkamadeed oo af Turki ah oo lagu hadlo xilligii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, wuxuuna si weyn uga duwan yahay qaabkii Turkiga looga hadli jiray maanta. Ku dhowaad 80% ereyada Turkiga ee Cusmaaniyiinta waxay ahaayeen ereyo amaah ah oo laga soo qaatay luqado kale, badankoodna Carabi, Beershiyaan iyo Faransiis. Ka dib markii ay dhacday Boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo aasaaskii Jamhuuriyadda Turkiga, dib-u-habeyn luuqadeed ayaa la hirgeliyey, oo ay ku jiraan aasaaskii Ururka Luuqadda Turkiga (Ururka Luqadda Turkiga), oo ah hay'adda rasmiga ah ee nidaamisa luuqadda Turkiga. Ururkan, oo leh falsafadda luuqad ahaanta, ayaa go'aansaday in lagu nadiifiyo luuqadda Turkiga ee ereyada amaahda laguna beddelo waxyaabo kale oo badan oo Turki ah. Sidan oo kale, kaliya ku saabsan 14% ereyada casriga ah ee Turkiga waa asal shisheeye.
Turkish-ka Cusmaaniyiinta ayaa fure u ah barashada taariikhdii Cusmaaniyiinta ee Turkiga. Adoo wata Turkish-ka Cusmaaniyiinta, kaliya ma aqrin kartid arjiyadaha taariikhiga ah, laakiin sidoo kale waxaad ku aqrisan kartaa suugaantii Cusmaaniyiinta iyo waraaqihii ku taariikheysnaa xilligii Cusmaaniyiinta. Istambuul, waxaad ka baran kartaa Turkish Ottoman meelaha soo socda:
Mesmek +90 212 531 01 41 İskenderpaşa Mahallesi, Ahmediye Caddesi, Hacı Salih Efendi Sokak, 6 Fatih.
Marwalba waxaa jira baahi sare oo looqabo - iyo, inyar, aan uqalmin - macalimiinta ESOL / EFL ee Istanbul. Macallimiin badan ayaa la shaqeeya shirkadaha waxbaridda ee gaarka loo leeyahay. Qaar kale waxay qandaraas ku bixiyaan qaab iskood ah.
Istanbul waa caasimada dhaqaalaha ee Turkiga. Dhamaan bangiyada maalgashiga ee waaweyn, bangiyada ganacsiga, tafaariiqda ajaanibta waaweyn iyo shirkadaha macaamiisha ayaa xafiisyo ku leh Istanbul. Degmada ganacsiga waxay la imaanaysay dhismayaal dhaadheer iyo xarumo ganacsi tobankii sano ee la soo dhaafay.
Bazaar Weyn intii lagu jiray Maalinta Jamhuuriyadda
Isku xirka bariga iyo galbeedka, doonista ah in la xakameeyo jidadka waaweyn ee ganacsiga ayaa sabab u ahaa in Istanbul la aasaaso markii horaba, sidaa darteed dukaamaysiga waa inaan xaqiiqda laga indhatirin khibradaada Istanbul.
Lacagta laga isticmaalo Istambuul waa liiraha Turkiga (TL) in kasta oo euro iyo US dollar sidoo kale laga aqbalo meelaha ay ku badan yihiin dalxiisayaashu (in kasta oo meelaha dalxiiska qaarkood sida Hagia Sophia ay aqbalaan oo keliya liradaha). Sarrifka lacagaha (döviz bürosu) iyo bangiyada waa ku badan yihiin Istanbul waxayna bixiyaan sicirro sarrif ah oo aad u tartan badan oo aan guddi lagu soo oogin. Haddii aad qorsheyneyso inaad booqato Istanbul, soo qaado lacag qalaad oo adag oo ku beddel markii aad timaaddo, gaar ahaan bangiga ama sarrifka lacagaha. Kaliya ku beddel waxa aad u baahan tahay maadaama ay dhib kugu noqonayso inaad ku beddesho lacagtaada hadhay ee lira lacagta dibedda markii aad ka tagto dalka. Ama, lacag kala bax ATM-yada markasta oo aad lacag u baahato.
Dukaammada waa la xiri karaa Axadaha. Inta badan xarumaha waaweyn ee laga dukaameysto waxay leeyihiin isbaarooyin ammaan oo aad inta badan ku aragto garoomada diyaaradaha iyo matxafyada ka hor inta aan la gelin.
Taariikhda Istanbul suuqyada leh jawi xagga bariga ah, oo mar uun si adag ugu fadhiya gunta galbeed ee Wadada Silk Road iyo dariiqyada dhir udgoon, dhammaantood sooyaallay xilligii Cusmaaniyiinta, dhammaantood waxay ku yaalliin jasiiradda Old City.
Dhanka kale, suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto (xarunta dukaamada, badanaa lagu soo gaabiyo AVM), oo ku soo qulqulaya magaalada oo dhan soddonkii sano ee la soo dhaafay, inta badan waxaa laga helaa New Istanbul iyo xaafadaha galbeedka, in kasta oo aysan si gaar ah ugu oollin degmooyinkan.
Haddii aad daba socoto dhar tayo sare leh, markaa waxaad si fiican ugu jiheysan kartaa Nişantaşı oo ku taal Yurub iyo Bağdat Avenue ee Aasiya.
Waa kuwan qaar ka mid ah waxa caan ku ah inay iibsadaan inta ay magaalada joogaan:
Delight Turkish, ama Lokum (sida dadka deegaanku ugu yeeraan). Iibsi wanaagsan tan iyo markii aad joogtid Turkiga. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku iibsato mid cusub halkii aad ka iibsan laheyd sanduuqyada horay loo soo buuxiyey iyo inaad hesho dhadhammo kala duwan halkii aad ka heli lahayd biyo-shubasho ama dhadhan liin leh oo laga heli karo dibadda. Gaar ahaan Pistachio waa mid aad u wanaagsan. Meesha ugu wanaagsan ee laga iibsado lokum ee Istanbul waa bakhaar. Istiklal Caddesi wuxuu si gaar ah u soo bandhigayaa dhowr dukaan oo lagu iibiyo macmacaanka Turkiga kiilogaraam oo ay ku jiraan lokum iyo helvah. Waxaa jira dukaamo aad u yar oo iibiya Farxada Turkiga ee Grand Bazaar, in kasta oo aad ku fiicantahay inaad jabiso qiimayaasha ka wanaagsan meelo kale laga heli karo.
Shaaha Turkiga (çay, CHAI). Cabitaanka qaranka ee Turkiga, waxaa laga soo saaray caleemaha ka soo baxa geedaha dhaadheer ee dhaadheer ee xeebta Badda Madow ee Turkiga. Dhaqan ahaan, shaaha turkiga waxaa lagu farsameeyaa nooca samovar-ka, oo leh dheri yar oo shaah aad u xoog badan ah oo ku fadhiya weel weyn oo biyo karkaraya ah. Ku shub xoogaa yar oo shaah adag muraayad yar oo qaabkeedu yahay tulip oo jarjar xoogga aad rabto biyo kulul. Turkiyiintu badanaa waxay ku daraan sonkorta kubeelka ah (waligood caano, inkasta oo inta badan aad caano ka heli karto haddii aad weydiiso.) Haysashada shaah kulul, kulul oo had iyo jeer laga helo meel kasta waa mid ka mid ah raaxooyinka nolosha ee aadka u wanaagsan ee Turkiga. Elma Çayı: shaaha tufaaxa, sida cabitaanka tufaaxa kulul (EHL-mah chah-yee) waa dhadhanka doorbidida, in kasta oo ay u badan tahay dalxiisayaasha; Turkidu waxay doorbidaan Siyah Çay (shaaha madow).
Qaxwaha Turkiga Digirta kafeega la dubay ka dibna si fiican loo shiiday ayaa lagu kariyaa dheriga (cezve), badanaa sonkorta, waxaana lagu qaadaa koob halka sagxadda loo oggol yahay inay degto. Dhaqanka caadiga ah ee Turkiga.
narghile (hookah) Waa aalad ama dhowr lugood leh oo lagu cabayo tubaakada dhadhanka dhadhanka loo yaqaan 'shiisha' taas oo qiiqa uu dhex maro saxanka biyaha (inta badan ku saleysan koob) inta aan la neefsan. Cabbirro kala duwan oo maandooriyayaal ah ayaa fududeynaya inaad hal guri ku qaadato.
Roogagga iyo kilimyada waxay noqon kartaa iibsi wanaagsan intaad magaalada joogto. Inta badan dukaamada ku takhasusay roogga magaalada, in kastoo, loogu talagalay ganacsiga dalxiiska, markaa soo qaado aasaaska gorgortanka si looga fogaado in lagala baxo dukaamadan. Badanaa waxay ku yaalliin agagaarka Sultanahmet.
khalkedoon. Dhagax nugul oo qaali ah oo loogu magac daray magaalada u dhow ee Chalcedon, waxaana lagu iibiyaa in badan oo ka mid ah dukaamada dahabka badan ee Istanbul.
Ka Bax Wadada La Garaacay. Meelaha bixiya waxa ugu wanaagsan ee ay qabtaan laakiin aan ku jirin mid ka mid ah waddooyinka dalxiis ee soo jireenka ah.
ArkeoPera, Yenicarsi Caddesi, 16 / A Petek Han, Galatasaray, +90 212 2930378. Buug-gacmeedka ugu wanaagsan ee qadiimiga ah ee Turkiga, milkiilaha wuu ogyahay goob kasta oo laga qodayo turkiga gacantiisa koowaad.
Gonul Paksoy, 6 / A Atiye Sokak, Tesvikiye, +90 212 2360209. Dhar aan nooc isku mid aheyn oo loogu talagalay boqornimada oo laga sameeyay maro casri ah oo casri ah.
Aasaaska Iznik, 7 Oksuz Cocuk Sokak, Kurucesme, +90 212 2873243. Waxay bixisaa dhoobada neo-Iznik ka dib markii ay dib u sameysay qaaciidooyinka asalka ah ee foornada Iznik ee asalka ah, oo shaqeyn jirtay inta udhaxeysa 1450 iyo 1650.
Sedef Mum, 50 Irmak Caddesi, Dolapdere, +90 212 2535793. Farsamayaqaanada waqtigaas ayaa sharfay farshaxanka shumaca, farshaxanka farshaxanimada leh iyo alaabada udgoon waxay bixiyaan hadiyado aad u fudud.
Liisaska shaqsiyadeed ee maqaayadaha, ka fiiri qormooyinka degmada.
Balık ekmek cunnooyinka ku yaal webiga Eminönü
Xaddidaadyo Meze asal ahaan waa nooc Turkish ah oo loo yaqaan 'tapas', oo loogu adeegsaday qaybo yaryar oo kulul iyo qabowba. Meesha ugu wanaagsan ee meze lagu cuno waxay noqon kartaa "meyhane".
Ke ganacsade Nooca ugu fiican ee Döner. Asal ahaan waa döner loogu adeegay saxan ay ku jirto suugo yaanyo subag leh oo dusha saaran iyo xoogaa caano fadhi ah oo dhinac ah.
Rotary. Had iyo jeer waa ikhtiyaar wanaagsan oo aad ku heli karto cunto dhakhso ah oo jaban. Albaabka laga soo galo Istiklal Street wuxuu ka kooban yahay daraasiin makhaayado yar yar oo tabarucayaal ah waxayna u adeegaan saacad kasta; in kastoo khibrad fiican (iyo tayada cuntada kafiican) waxaad ubaahnaan kartaa inaad ku dhex meeraysato xaafadaha la deggan yahay, maxaa yeelay wax kasta oo u dhow meherad ganacsi ama dalxiis ayaa si aad ah loo qiimeyn karaa oo tayo ahaan aad hoos ugu dhici kartaa.
Lahmacun Waa "hilib leh cajiinka", waa goos goos goos ah oo khafiif ah oo lagu dubay hilib shiidan (inta badan lo'da iyo wanka) iyo khudradda shiidan iyo geedaha ay ku jiraan basasha, yaanyada iyo dhir, ka dib la dubay. Lahmacun waxaa badanaa lagu rusheeyaa liin dhanaan waxaana lagu duudduubay khudaar, oo ay ku jiraan pickles, yaanyo, basbaas, basasha, salaar, iyo ukunta duban; noocyo caadi ah ayaa laga heli karaa inay shaqaaleeyaan hilibka kebab ama suugada.
Dürüm duub dhaqameed Turki ah (oo laga sameeyay lavash ama yufka flatbread) kaas oo ka buuxa maadooyinka kebab ama döner.
Balık-Ekmek. Balik-Ekmek (macno ahaan "kalluun iyo rooti") waa rooti rooti kalluun ah oo loogu adeego doomo yaryar iyo waxyaabo yaryar oo lagu cunteeyo oo ku yaal Eminonu. Waxay sidoo kale caan ku tahay cunnada lagu cunteeyo ee xeebta Kadıköy. Rooti rooti ah oo caadi ah ayaa ka kooban hal kalluun oo yaryar oo la shiilay, xaleef yaanyo iyo basal ah. Si kastaba ha noqotee, dhadhanka ayaa ka baxsan filashooyinka nooca asaasiga ah. Qiimuhu waa qiyaastii 8 TL. Mar labaad, waa mid jecel deegaanka.
Anchovy. Xilliga Dayrta iyo Jiilaalka Anchovy-ka Badda Madow waxay u haajiraan Bosphorus, kalluumeysatada maxalliga ah oo xoog ugu soo baxa inay ka faa'iideystaan. Dhammaan makhaayadaha kalluunka waxay ku leeyihiin liiska xilliyada. Waxay umuuqataa adeega caadiga ah inuu yahay sacab muggiis oo kalluun shiilan oo qoto dheer leh basasha iyo rootida Kalluunka wada cun, waa guuleyste. Raadi makhaayadaha yaryar ee ka dambeeya ganacsatada kalluunka ee dhinaca Karakoy ee Buundada Galata, dhinaca galbeed. Filo inaad bixiso TL6.
Patso. Patso waa nooc ka mid ah sandwich ka kooban eyga kulul iyo shiilannada Faransiiska. Badanaa waxaa loogu adeegaa buukooyin yar yar oo ku teedsan xeebta Uskudar qiimaha sandwich-ka waa 2.50 TL. Qiimaha jaban ayaa kor u qaadi kara sunnayaasha laakiin buffooyinkaani waxay furan yihiin 24/7 waxayna u adeegaan qiyaastii 1000 sandwiches maalin kasta. Inkasta oo faa iidada faa iidadu hooseyso, hadana waxay sameystaan ​​nasiib, sidaa darteed ma yarayaan tayada wax aad u badan (marka laga reebo hamburgers, ha taaban kuwa ku sugan Uskudar, laakiin xaqiiqdii iskuday hamburgerska basbaaska leh ee Taksim).
Mid ka mid ah waxyaabaha aan la seegi karin ayaa ah tan deegaanka Jalaato lagu iibiyo tarabuunka waddooyinka, loo yaqaan jalaato. In kasta oo dhadhanku u yahay mid heer u ah gobolka, jalaatada badanaa waxay ku daraan soosaarida xididka orchid, taas oo siisa cajaa'ib xad dhaaf ah iyo muuqaal adag, sidoo kale amaahda lafteeda si loogu isticmaalo suuq geynta iyo soo jiidashada indhaha halka kuwa wax iibiya ay khiyaamo sameeyaan si ay isugu dayaan inay u iibiyaan barafka kareem Isku day!
Baradho la dubay waa cunto fudud oo si fudud u noqon kara cunto buuxa. Waxay asal ahaan ka timid Albania laakiin waxay ku gaar tahay Istanbul qaabkeeda hadda. Waxay ka kooban tahay baradho la dubay oo ay ka buuxaan waxyaabo kala duwan sida jiiska, majones, ketchup, pickles, kaabajka gaduudan ee la jarjaray, macaaneeyaha, xaleefyada sausage, karootada, boqoshaada, iyo saladka Ruushka iyo kuwa kale, kuwaas oo midkoodna lagu dari karo ama laga saari karo isku darka. Halka baradho la dubay waxaa laga cabi karaa makhaayado badan oo magaalada ku yaal, waxaa fiican in laga helo mid ka mid ah maqaayadaha ku yaal Ortaköy, oo leh caado dheer oo diyaarin baradho la dubay runtiina waxaad bixisaa kuwa buuxa oo dhadhan fiican leh. Qiyaastii 7-8 TL midkiiba.
Laabta la dubay(“Kestane Kebap, sida dadka deegaanku ugu yeeraan) waxaa laga iibiyaa gawaarida magaalada ku wareegsan, waana cunno fudud aad u fiican in la helo marka cimiladu qabowdo, maadaama ay gacmahaaga diirimaad ka dhigayaan. 3 TL ee 100 g. Cun xilliga jiilaalka.
Hadhuudh la kariyey oo la dubay waxaa laga iibiyaa gawaarida magaalada ku wareegsan, waana cunto fudud oo fudud oo lagu dhex wareego. Qiimuhu wuu ku kala duwan yahay gaadhigii gaadhigii iyo aaggii magaalada (1-1.5 TL).
Ha moogaanin "Simit," rooti diiran oo laga iibiyo gawaarida magaalada ku wareegsan, waana cunto fudud oo fudud oo lagu wareego. Dareenka iyo dhadhanka ayaa xoogaa la mid ah bagel sisinta. Qiimuhu wuu ku kala duwan yahay gaadhigii gaadhigii iyo aaggii magaalada (0.75-1 TL).
Sidoo kale, hubi inaad isku daydo Ayran, cabitaan maxalli ah oo ku saleysan caano fadhi, in kasta oo dhanaan iyo in badan ka khafiifsan yihiin. Marwalba kuma qorna menu-ka ama lama soo bandhigin, laakiin halkaas ayay ku jirtaa, markaa weydii.
Casiir cusub oo la tuujiyey iyo casiir isku dar ah waxaa laga iibiyaa tarabuunka iyo dukaamada yaryar ee kuyaala magaalada oo dhan, waana daaweyn nasiino leh (gaar ahaan bilaha kulul). Isku-darka wuxuu u dhexeeyaa casiir liin fudud ilaa xulashooyinka dhifka ah sida pomengranate ama kiwi. Qiimuhu wuu ku kala duwan yahay dukaanka ilaa dukaanka, aagga magaalada iyo kakanaanta amarkaaga (2-4 TL).
Halkee laga joogaa Istanbul
Guud ahaan, waa suurtagal in laga helo nooc ka mid ah hooyga degmo kasta oo ka tirsan Istanbul. Halkan waxaa ah liis deg deg ah oo ku saabsan degmooyinka ay ku badan yihiin:
academy military waa meel caan ah oo lagu hoydo, sida Xarunta weyn ee magaalada cusub ee dhinaca Yurub, waxaana ku jira guryo kala duwan oo heer caalami ah, hoteello, iyo hudheelo dhexdhexaad ah oo loogu talagalay socotada miisaaniyadda. Nişantaşı iyo Taksim waxay Harbiye u jiraan 5 daqiiqo si aad Harbiye ugu joogtid oo aad uga faa'iidaysato dhammaan hawlaha Nişantaşı iyo Taksim.
Risaalo waa Xarunta ugu weyn ee magaalada cusub ee dhinaca Yurub. Dadka deegaanka iyo dalxiisayaashu waxay u tagaan Taksim dukaamaysiga iyo madadaalada, iyo sidoo kale hudheelo dhexdhexaad ah oo loogu talagalay socotada miisaaniyadda. Waxa kale oo aaggaan ku yaal laba hostel.
Blue Xarunta ugu weyn ee magaaladii hore ee dhinaca Yurub. Waxay leedahay xulasho tayo leh, hudheelo macquula leh, qaar badan oo leh dabaqyo dusha ka eegaya geeska dahabka ah, ama leh aragtida Badda Marmara iyo Masaajidka Buluugga ah. Inta badan hoyga nooca hudheelka ah ee ay tagaan socotada madaxbannaan waxay ku yaalliin degmadan, in kasta oo ay suurtogal tahay in la helo hoteello dhawr ah oo suuqyo waaweyn leh.
Hotelo aad u qiimo badan ayaa laga heli karaa xaafadaha galbeedka, gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha, iyo sidoo kale / eegida bangiyada Bosphorus.
Iyada oo la xirayo barxada safarka ee 'Ataköy caravan park', oo ah meesha aad ku jiidi karto caravan magaalada ugu dhow ayaa hadda ku taal Selimpaşa, oo ah bannaanka galbeed ee magaalada aad uga fog, in kasta oo ay weli u jirto meel 40 km wanaagsan u jirta qaybaha magaalada.
Istambuul waa magaalada keliya ama gobolka ku yaal Turkiga oo leh in ka badan hal lambar taleefan: 212 dhinaca Yurub, 216 dhinaca Aasiya iyo Jasiiradaha Princes. Markaad ka soo wacayso mid ka mid ah qaaradaha kale, qaabka wicitaanka caadiga ah ee loo isticmaalo wicitaanada dhexdhexaadka ah waa in la adeegsadaa, sida haddii ay tahay wicitaan isku-xidhka: 0 + nambarka aagga (212 ama 216) + lambar taleefan oo ka kooban 7 lambar. Waxay u muuqan kartaa wicitaan dhexdhexaad ah, laakiin waxaa loola dhaqmi doonaa sidii wicitaan maxalli ah oo la xiriira bixinta. Markaad samaynaysid wicitaanka qaaradaha, haddii aad ilowdo inaad garaacdo lambarka, wicitaankaagu wuu dhacayaa ma si otomaatig ah ayaa lagaa rabaa lambarka qaaradda kale, waxay u badan tahay in lagugu xiri doono lambarka "khaldan" ee isla qaaradda kula jooga, maxaa yeelay tiro badan oo lambarro ah ayaa loo adeegsadaa labada qaaradood (in kasta oo ay jiraan xeerar kala duwan oo dabcan ah ). Markaad garaacayso lambar ku yaal qaaradda aad adigu horay u taagnayd, waxaa ku filan oo keliya lambar 7-god ah. Ha iloobin inaad garaacdo koodhka marka hore iyadoon loo eegin qaaradda aad ku sugan tahay haddii aad ka wacayso nambarka taleefanka gacanta (xitaa haddii ay tahay lambar isla qaaradda kula jooga), in kastoo.
Kaararka SIM-ka ee horay loo siiyay ayaa laga iibsan karaa (qiyaastii 30 TL oo leh 5 TL dheelitir ah oo la isticmaali karo) Vodafone, Türk Telekom ama kiishka Turkcell ee garoonka diyaaradaha ama dukaamada ku xeeran magaalada. Waxaa laga yaabaa inay ku weydiistaan ​​inay nuqul ka sameeyaan baasaboorkaaga.
Waad isticmaali kartaa taleefannada ajnabiga ah qiyaastii laba toddobaad, ka hor inta IMEI aysan xannibmin dhammaan xanbaarayaasha (marka laga reebo haddii aad dhex mushaaxeysid SIM kaar ajnabi) waxaadna u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso taleefanka, oo aad sameyn karto oo keliya 2dii sanaba mar.
Cafe-ka Internetka ee Istanbul
Hoteel: Huteel kasta wuxuu leeyahay Wi-Fi u gaar ah. Huteelada qaarkood waxay dhib kala kulmaan dejintooda shabakada ama isku xirka goobta taariikhiga ah hase yeeshe ugu yaraan waxaad kuheli doontaa wi-fi bilaash ah hudheelkaaga. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad barato lambarka sirta ah ee wifi si aad internetka uga gasho.
Makhaayad walba, biistro, maqaaxi kasta waxay la wadaagaan internet-kooda martidooda. Xitaa makhaayadaha yaryar hadda waxay leeyihiin internet. Xasiloonida iyo xawaaruhu waxay kuxiranyihiin halka aad joogto iyo nooca kafateeriyada, bistro ama maqaaxi aad ku jirto. Haddii aad ku jirto Starbucks waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad ku xirto qalabkaaga (SSID waa inuu noqdaa TTNET ama DorukNet, iyo haddii aad ku jirto Nero DorukNet) oo buuxi macluumaad aasaasi ah oo xaqiijin ah oo ay tahay inaad buuxiso. Taas ka dib, waxaad diyaar u tahay inaad tagto. Haddiise aad ku jirto maqaayada kale ama makhaayadaha waxaad ka codsan kartaa kalkaaliyahaaga inuu helo SSID iyo Password intaas ka dib waxaad diyaar u tahay inaad tagto. Makhaayado badan iyo makhaayado badan oo ku yaal Istiklal Caddesi ee Beyoglu ayaa leh nidaamka.
Xarunta dadweynaha iyo fagaarayaasha:
Dawladda Hoose ee Istanbul waxay ku bixisaa wi-fi dadweynaha bilaash ah xarumaha magaalooyinka iyo fagaarayaasha ugu badan. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah (markaad u dhowdahay mid ka mid ah xarumahan) iska diiwaangelinta aqoonsigaaga taleefankaaga gacanta waxaadna heli doontaa lambarka sirta ah ee lagu galo.
Waad kireysan kartaa aaladaha wifi ee moobiilka intaad ku sugan tahay Turkiga. Waxay ku shaqeysaa iyada oo ku saleysan isku xirnaanta 3G ee waddanka oo dhan, waxaadna isku xiri kartaa ilaa 10 qalab isla waqti isku mid ah. Qalabkan xajmigoodu yar yahay ayaa si fudud looga dalban karaa khadka tooska ah.
In kasta oo ay jiraan shirkado badan oo caalami ah oo kireysta aaladaha moobiilka, inta badan laba shirkadood oo maxalli ah ayaa shaqeynaya:
Kirada 'n Ku xirnaanta;
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka ka socda Istanbul
Sida magaalooyinka badan ee Yurub, laakiin gaar ahaan meelaha dadku ku badan yahay ee Istanbul, fiirso jeebabkaaga iyo dukumintiyada safarka sida jeebadaha jeexjeexay nooc kasta oo xeelado ah si ay kaaga helaan. Wax badan haku kalsoonaan dareenka 'aaminka ah' ee aad ka heshay joogitaanka booliska. Fagaaraha Taksim, Sultanahmet Square, Istiklal Avenue, Kadikoy Square iwm. Kaamirooyinka amaanka oo ay kormeeraan booliska oo aan joogsi lahayn.
Istanbul waxaa ku yaal seddex ka mid ah kooxaha ugu waa weyn dalka Turkiga waxaana laga yaabaa in kubada cagta Yurub: Be :iktaş, Fenerbahçe, iyo Galatasaray. Waxaa lagugula talinayaa inaadan xirin midabada isku xirnaanta naadiyada midkood-madow & cadaan, badweyn & huruud, iyo casaan & jaalle siday u kala horreeyaan, qaasatan maalmaha kulamada dhexmara kooxaha sababo la xiriira tartan cabsi badan oo ay wadaagaan.
Istanbul gudaheeda, darawalada badankood uma hogaansami doonaan wax sharci ah. Xitaa haddii aad mudnaanta ku leedahay isgoyska waddada, marinka laamiga, ama xitaa inta lagu jiro iftiinka cagaaran, had iyo jeer ka digtoonow agagaarahaaga. Xitaa haddii aad ku jirto hal waddo oo kaliya, hubi labada dhinac intaadan ka gudbin wadada. Waa wax iska caadi ah in darawalada turkigu ay adeegsadaan tuuryo.
Khiyaanooyinka ka socda Istanbul
Khiyaanada Masaajidka Buluuga ah "haga"
Markaad dhex socoto albaabbada Masjidka Buluugga ah, iska jir dhoolla caddaynta, cibaado saaxiibtinimo leh oo si dhakhso leh kuu siiya inay kuu noqdaan hagitaan toos ah oo aad ku dhex marayso masaajidka iyo hareerahiisa; Waxay si qurux badan uga warrami lahaayeen wixii ku saabsan masaajidka; aadaabta, taariikhda iyo dhaqanka Islaamka. Si kastaba ha noqotee, looma baahna in la sheego, waxay aakhirka dalban doonaan qiimo ku saabsan "adeegyadooda", oraah laga yaabo inay sare u kici karto 50 TL. Waxaad ka fiicnaan laheyd inaad dalxiis ku sameysato safar qaas ah oo khadka tooska ah ah; ama maya, maadaama masjidka asal ahaan xor u yahay qof walba si kastaba ha noqotee.
Khiyaano caan ah oo loogu talagalay in lagu qanciyo dalxiisayaasha inay booqdaan maqaayadaha qaaliga ah ee cuntada dhexdhexaadka ah waxaa ka mid ah kuwan soo socda: Intaad socoto, waxaa ku soo maray nin Turki ah oo sheeganaya inuu kaa aqoonsan yahay hudheelka aad degan tahay (tusaale ahaan wuxuu kuu sheegi doonaa inuu shaqeeyo halkaas oo ah adeege ama soo dhaweyn). Wuxuu ku weydiin doonaa meeshaad u socoto. Haddii aad cuntada u baxaysid, wuxuu kugula talin doonaa makhaayad, isagoo ku andacoonaya inay tahay meesha uu ku kaxeeyo qoyskiisa ama asxaabtiisa markay wax cunayaan. Waxa laga yaabaa inuu ku siiyo talo kale (tusaale waqtiga ugu fiican ee aad ku booqan karto qasriga Topkapi) si wada hadalka looga dhigo mid dhab ah oo saaxiibtinimo leh. Makhaayada uu ku talinayo ayaa hubaal noqon doonta mid dhexdhexaad ah ama tayo yar, shaqaalaha halkaas jooga ayaa isku dayi doona inay kaa iibiyaan suxuun qaali ah adigoon ogeyn. Tusaale ahaan, waxay dhiirrigelin karaan suxuunta lagu calaamadeeyay 'MP' (qiimaha suuqa) ee ku yaal menu-ka, sida 'kalluunka cusbada' (kalluunka lagu dubay cusbada), oo qiimihiisu noqon karo in ka badan 100 TL. Waxay sidoo kale ku siin karaan suxuun dheeri ah oo aadan dalban ka dibna ku dar biilka loogu talagalay 25-50 TL dheeraad ah, oo ay weheliyaan kharashyo dheeraad ah oo loogu talagalay adeegga iyo canshuurta. Hal makhaayad oo u muuqata inay adeegsaneyso khiyaanadan si ay macaamiil ugu hesho waa Haci Baba oo ku taal Sultanahmet.
Sidoo kale ka digtoonow ragga Taksim jooga ee biyo ugu rusheeyaa qoortaada qoorta. Markii aad jeedsato, waxay isku dayi doonaan inay dagaal kugu bilaabaan maadaama nin kale soo galay oo ku dhacay. Raggaani waxay u muuqdaan inay wataan mindiyo aadna khatar ayey u noqon karaan.
Khiyaanooyinka Lira / euro
Khiyaano isdaba joog ah, badanaa hudheelada yaryar (laakiin sidoo kale waxay ku dhici kartaa xaalado kale duwan), waa in lagu xuso qiimaha lira ka dibna mar dambe, marka lacag bixinta la rabo, sheegasho in qiimaha lagu bixiyay euro. Huteelada diida bixinta lacag bixinta horaantii joogida oo kaa doorbiday inaad "bixiso markaad baxdo" waa inay shakiga kiciyaan. Huteelada ka shaqeeya khiyaanadan badanaa waxay bixiyaan adeeg aad u fiican iyo hoyga qiimo macquul ah waana ogyihiin in martida badankood ay waxbadan soo gabagabeyn doonaan isla markaana ay bixin doonaan cabasho la'aan - sidaas awgeed tani waxay calaamad u noqon kartaa huteel wanaagsan.
Khiyaanada kale waa mid la xiriirta lacagta oo waxay u dhacaysaa sida aad ugu socotid waddooyinka. Nin Turki ah ayaa ku haysta oo ku weydiinaya meesha aad ka timid. Haddii aad sheegto dal euro-ah, ninka wuxuu doonayaa inaad ka beddesho warqad € 50 ah oo kaa socota oo aad ugu beddesho € 2-qadaadiic ah oo uu muujinayo. Wuxuu gacanta ku hayaa lacagta qadaadiicda ah. Dhibaatada awgeed, wuxuu leeyahay wuxuu ku siin doonaa '30 € 2-qadaadiic, isagoo ka dhigaya € 60 wadarta '. Ha ku raacsaneyn sarrifkan lacagta, maadaama lacagta ugu horreysa runti ay tahay € 2-qadaadiic, laakiin (in badan oo ka mid ah) inta kale ee qadaadiicdu u badan tahay waxay noqon doonaan qadaadiic 1-lira ah (oo aad isugu eg), laakiin qiimaheedu yahay oo keliya 1/4 qiimaha € 2.
Baarar badan oo ku yaal aagga Taksim ayaa ku siinaya biilal been abuur ah. Badanaa waa kuwo sifiican loo sameeyay oo ay adagtahay in loo aqoonsado inay yihiin been abuur mugdi ah. Hal dariiqo oo lagu xaqiijiyo sax ahaanshaheeda waa in laga hubiyo cabirkiisa biil kale. Mid kale ayaa ah in biilka lagu hayo ilaa nal xoog leh, wajiga dhinac loo jeediyo, lana hubiyo muuqaalka isla wajiga kujira biilka. Qiimaha biilka (20, 50, iwm.) Waa inuu ka muuqdaa ag-tuska, iftiinka iyo tarjumaadda. Hadday midkood tahay haddii labadan astaamood ee amniga la waayey, isku day in biilka la beddelo ama booliiska la hadal.
Ragga qaarkii waxay ku dhex wareegi doonaan Taksim (ama meelaha kale ee dalxiisku u badan yahay) iyagoo wata xirmada kabaha, burushkuna wuu dhici doonaa. Tani waa khiyaano lagu sababayo qaar dalxiis reer galbeed ah oo damiir leh inay soo qaadaan oo ay ugu celiyaan milkiilaha, ka dibna mahadcelin ka bixin doona oo ku deeqi doona inuu kabahaaga si bilaash ah u iftiimo Inta uu intaas samaynayo, wuxuu ka hadli doonaa sida uu uga yimid magaalo kale iyo sida uu u leeyahay ilmo jiran. Dhamaadka, iftiimintu waxay dalban doontaa qiimo aad u sarreeya oo ah adeegyada "bilaashka ah" ee la bixiyo marka loo eego sida caadiga ah suuqa. Xeelad la mid ah ayaa ah inaad weydiisato sigaar isla markaana aad u sii wadato si isku mid ah.
Haddii aad si firfircoon u go'aansato inaad jeclaan lahayd in kabahaagu dhalaalaan, markaa filo inaad bixiso wax aan ka badnayn 5 TL labadaba.
Tagaasida ayaa ku badan Istanbul waana qaali heerarka Reer Galbeedka Yurub iyo Ameerika. Waxaa laga soo qaadi karaa xarumaha tagaasida ee magaalada oo dhan ama waddooyinka. Gawaarida faaruqda ah ee waddooyinka ayaa ka dhawaajin doona dadka lugeynaya si ay u eegaan haddii ay jeclaan lahaayeen raacitaan, ama cabsida ayaa waxaa ku farxi karaya dadka lugeynaya iyagoo indhaha ku haya wadaha iyo gacan ku haynta Tiro yar oo taksiilayaashu waxay ku hadlaan luuqado aan ahayn Turki, laakiin waxay qabtaan shaqo caddaalad ah oo ay ku xallinayaan magacyada meesha sida khaldan loogu dhawaaqay ee ay bixiyeen wadayaasha ajaanibta ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad qorto magaca meesha aad aadeyso oo aad isku daydo inaad horey uhesho khariidad si aad u muujiso darawalka, si looga fogaado wax kasta oo isfaham la'aan ah iyo waliba khiyaanooyin dhici kara In kasta oo tagaasida ay badan yihiin, la soco in tagaasida ay adag tahay in la helo inta lagu jiro saacadaha ugu badan ee taraafikada iyo saxmada taraafikada iyo marka roob da'o iyo barafka. Sidoo kale way yar yihiin inta lagu jiro habeennada, waxay kuxirantahay aagga waana adag tahay in la helo saqda dhexe kadib.
Isku day inaad iska ilaaliso inaad taksi u isticmaasho masaafooyin gaagaaban (5-10 daqiiqo oo socod ah) haddii ay suurogal tahay. Darawallada tagaasida qaarkood way ka xanaaqi karaan tan, gaar ahaan haddii aad taksi uga wacdid taksi xarun halkii aad ka soo dhaweyn lahayd waddada. Haddii aad dooneysid tagaasida masaafo gaaban, kaliya kasoo dir wadada, ha aadin xarunta tagaasida.
In yar oo tagaasida ayaa suumanka leh, darawalada qaarna waxay u muuqdaan kuwo taxadar la'aan ah. Haddii aad jeceshahay inuu darawalku ka gaabiyo, waxaad dhahdaa “yavash lütfen” (tartiib tartiib). Codsigaaga waa la ixtiraami karaa ama lama sharfi karaa.
Sida magaalo kasta oo weyn, dalxiisayaashu way uga nugul yihiin khiyaanooyinka taksi marka loo eego dadka deegaanka. La soco in darawallada tagaasida ay isticmaalaan baabuurta ku xiran xarun gaar ah, iyo magaca iyo lambarka taleefanka xarunta, iyo sidoo kale nambarka taarikada, lagu qoro baabuur kasta dhinaciisa. Ogaanshaha ama sawir qaadista macluumaadkan ayaa laga yaabaa inay faa'iido kuu leedahay haddii aad dhibaatooyin la kulanto. Guud ahaan, raacida tagaasida gacansaarka la leh hoteelada waaweyn (Hilton, Marriot, Ritz, iwm.) Waa amaan, mana aha muhiim in la joogo hudheeladan si loo isticmaalo taksi ka tagaya xarumahooda.
Qaar kale waxay qaadan karaan dariiqyo dhaadheer oo aan loo baahnayn si ay u kordhiyaan lacagta ku waajibtay (in kasta oo mararka qaarkood waddooyin kale lagu beddelo sidoo kale si looga fogaado taraafikada Istanbul, oo aad u xun). Khiyaanooyinka qaarkood waxay ku lug leeyihiin macaamil bixinta; tusaale ahaan, haddii wadaha uu bixiyo 50 TL markii kaliya loo baahan yahay 20 TL, darawalku wuxuu si dhaqso ah ugu beddeli karaa 5 TL note wuxuuna ku adkaysanayaa in inta kale ee 20 TL ay wali sabab tahay ama laga yaabo inuu u beddelo biilka dhabta ah ee mid been abuur ah iyo ku adkeyso in lacag kala duwan la bixiyo.
Hababka looga fogaado khayaanada taksiga:
1. Fariiso kursiga hore ee rakaabka. Daaw mitirka. La soco ficillada darawalka (buunka dhawaaqa, bareegyada, iwm) fiiro gaar ahna u yeelo taximeter-ku. In kasta oo ay dhif tahay, darawalada qaar ayaa siligayn doona qaybo ka mid ah kontarooladooda si ay u kordhiyaan qiimaha marka hawlgaliyo. Haddii aad la joogto kuwa kale ee muhiimka ah, si kasta u samee. Kaydso koolkoobka ka dib fuulida. Hubi haddii shaabadda mitirka ay jabtay. U isticmaal taleefankaaga iftiin. Tani waxay ka dhigi doontaa darawalku inuu ogaado inaad taxaddar leedahay. Haweenka waxaa fiican inay fadhiistaan ​​kursiga dambe (halkaasoo aad mitirka ka arki karto dhexda), maadaama ay mararka qaar dhibaatooyin ka jiraan darawalada tagaasida oo si saaxiibtinimo leh ula dhaqma, hor fadhiistaana waxay astaan ​​u tahay inay haweeneydu soo dhawaynayso dhaqanka noocaas ah.
2. Weydii "Immisa ayaa loo baxayaa…?" (Ingiriisiga aasaasiga ah waa la fahmay), ka hor intaadan tagsan tagsiga. Qiimuhu wuxuu noqon doonaa mid sax ku ah midka ku jira canshuuraha dhamaadka raacdada. Haddii qiimuhu kula eg yahay, fuul taksiga oo u sheeg inay ku dhejiyaan Taximeter-ka Qadarka ay codsanayaan waa isku mid inta lagu jiro habeenka iyo maalinta.
3. Ogow wadada. Haddii aad fursad u leedahay, raadi khariidad oo ka dalbo darawalku inuu maro wadada aad dooratay ee aad ku aadeyso. Marar badan waxay wadi doonaan wadada dheer ama waxay iska dhigayaan inaysan garanaynin meesha aad u socoto si ay lacag badan kaaga helaan. Haddii darawalku sheegto inuusan garanaynin wadada loo maro aag weyn ama goob kulan, diido adeegyadiisa maadaama ay u badan tahay inuu been sheegayo.
4. Xulo darawal da 'weyn. Wadayaasha tagaasida waayeelka ah uma badna inay khiyaameeyaan rakaabka.
5. Darawal taksi ha ku arko lacagta gacmahaaga oo ha muujiyo qiyam isla markaana ha ka go'an tahay. Tani waa 50 lira. OK? Qaado 50kan lira oo dib u siiso 30 liraada ok?. Tani waxay damaanad qaadeysaa qiimaha lacagtaada. Haddii kale, 50-kaaga lira waxay noqon kartaa 5 lira isla markiiba gacmihiisa. Isku day inaad had iyo jeer ku haysato boorsada jeebkaaga 10 lira ama 20 biilal. Tani waxay ka dhigaysaa khiyaanooyinka lacagta guud ahaan kuwo aad u adag. Haddii aad ogaato in darawalku isku dayay inuu kuu adeegsado khiyaanada 50 lira ilaa 5 lira, wac booliska (# 155) isla markaaba qor taargada.
6. Abuur muuqaal weyn haddii dhibaato jirto. Haddii aad gabi ahaanba tahay qof toggan waxaad ku dhacday khiyaamo, u hanjabtay ama wac booliska iyo, haddii aad dareento inay ku caawinayso, bilow inaad qayliso. Taksiilayaashu waxay kaliya ka jeexi doonaan kuwa ay u maleynayaan inay ku dhici doonaan; abuurista muuqaal ayaa soo jiidanaysa iyaga waxayna sahlaysaa in la bixiyo sicirka saxda ah.
Si taxaddar leh u fiiri liiska makhaayadaha waddooyinka si aad u aragto calaamado muujinaya in siciradu aysan ahayn mid takoorid ah - haddii qiimayaashu si cad u sarreeyaan, si fudud iskaga tag. Tilmaamaha wanaagsan ee sicir bararku waa wareegga laba nooc oo kala duwan ah - liiska “shisheeyaha” ayaa sida caadiga ah lagu daabacaa kaar la duubay oo ay ku qoran yihiin qiimaha menu oo ku qoran calaamadda dharka / texta, tusaale ahaan, qiimaha lama daabicin; xaaladahaas, filo in sicirka ajaanibtu aad u sicir biirayo (300% ama ka sareeya).
In kasta oo tani runti aysan dhibaato ku ahayn Beyoğlu ama Ortaköy, iska ilaalinta kafateeriyada hawada furan ee ku wajahan barxadda dambe ee Spice Bazaar (Sultanahmet) waa caqli. Aagga isla markiiba ku yaal woqooyiga Spice Bazaar sidoo kale waxay ku gurguuranayaan touts makhaayadaha 'caan ka ah'.
Haysashada nargile (tuubbada biyaha) waa waxqabad caan ka ah Istanbul, Tophane (top-hane) waa goob caan ku ah hawshan halkaas oo ay ka jiraan dukaanno fara badan oo qashin ah oo si fudud taraamku ku gaari karo, isaga oo ka fogaanaya meel la yiraahdo "Cali Baba ”ee Tophane waa caqli badan yahay, badiyaa waxaa lagugu adeegi doonaa taarikada aadan codsan sida saxanka lowska, waxaadna rajeyneysaa inaad heysato biil ku dhow US $ 50 oo ah qashinkaaga!
Ragga damacsan inay daba galaan dumarka ajnabiga ah ayaa laga yaabaa inay joogaan goobaha dalxiiska. Ragga noocan oo kale ah waxay u qaadan karaan in ajaanibtu leeyihiin lacag aad u tiro badan ama qiyam xor ah oo ay ula tagi karaan dumarka ajaanibta ah si haasaawe ah ama horay u socda iyagoo raadinaya galmo ama lacag (midkood xatooyo ama iibinta badeecado qiimo jaban). Haddii lagu dhibaateeyo, isticmaal caqli oo u tag meesha dadka kale joogaan; badanaa tani waa dukaanka ugu dhow. Abuuritaanka goob fagaare ah ayaa joojin doonta iibiyayaal badan, oo weedhahani waxay faa'iido u yeelan karaan xaaladaha noocaas ah:
Mdat! - "I caawiya!"
Ayay! - "Qallafsan!"
Barok beni! - "I daa aniga!"
Duur! - "Jooji!"
Gider khaldan? - “Ma tagi doontaa?!”
Ama runti isaga halaag:
Beni takip etme? - “Fadlan ma joojin kartaa dabagalkayga?”
Polisi ariyorum - "Waxaan u yeerayaa booliska!"
Mararka qaar isku day inaadan isticmaalin af turki maxaa yeelay dabagalka ayaa aad u jeclaan doona, qaylo oo orod oo raadso meel amaan ah oo dad badani joogaan iyo booliska.
Istanbul PD waxay leedahay waaxda "Booliska Dalxiiska" halkaas oo socotada ku soo wargelin karaan luminta baasaboorka iyo xatooyada ama fal dambiyeed kasta oo kale oo lagu dhibaateeyo. Waxay xafiis ku leeyihiin Sultanahmet waxaana lagu soo waramayaa inay ku hadli karaan Ingiriis, Jarmal, Faransiis, iyo Carabi.
Booliska Dalxiiska (Turizm Polisi), Yerebatan Caddesi 6, Sultanahmet (dhismaha alwaaxda jaalaha ah ee udhaxeeya Hagia Sophia iyo kadinka ceel biyoodka Basilica, midba dhawr mitir ayey u jirtaa),, fax: +90 212 512 76 76.
Caafimaadkaaga ku joog Istanbul
Biyaha tuubada waxaa laga yaabaa inaysan badbaado ku xirnayn hadba meesha aad ku cabto. In kasta oo biyaha tuubada lafteedu nadiif yihiin, haamo badan oo biyo ah oo maxalliga ah si fiican looma dayactiro, midna waa inuu isku dayaa inuu iska ilaaliyo biyaha tuubbada haddii ay suurogal tahay. Dadka deegaanku waxay si weyn u doorbidaan biyaha dhalada ku jira isla sidaas oo kale ayaa laga quseeya maqaayadaha Filo inaad lacag ku bixiso biyaha makhaayadaha (ilaa 2 TL).
Cuntada iyo cabitaannadu intabadan waa heerarka caalamiga ah. Cuntooyinka Turkiga qaarkood waxaa lagu yaqaan inay isticmaalaan noocyo kala duwan oo udgoon ah kuwaas oo saameyn ku yeelan kara dalxiisayaasha caalamiga ah ee laga yaabo inaysan caadeysan maaddooyinkaas, in kastoo badankood ay cuni karaan carrab kasta.
Isticmaal caqli gal marka aad iibsaneyso cuntooyinka qaarkood, gaar ahaan kuwa ku iibiya waddooyinka. Cunnooyinka macaan sida “Firin Sutlac” (nooc caano bariis ah) si dhakhso leh ayey u xumaan karaan maalinta kulul, sidoo kale alaydu mararka qaarkood iibinta waddooyinka ayey ku dhici kartaa.
Hotelada iyo hudheellada Istanbul ee hudheellada iyo hudheellada ayaa aad ugu habboon suuqa markay yimaaddaan — runtiina waxay akhriyaan tilmaamaha safarka ee caanka ah ee Istanbul marka la qoro ama si wanaagsan loo eego, waxay kor u qaadaan qiimaha dusha saqafka oo ay iska dhaafaan kharashyada. Hotelada / makhaayadaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa raqiiska ah, waxaa laga yaabaa inaad runti waqti fiican hesho haddii aad iska ilaali meelaha ku qoran tusmadaada. Ku kalsoonow sankaaga.
Saldhigga lacag-bixinta ee taleefannada gacanta ee Istanbul
Qunsuliyadaha ku yaal Istanbul
Qaar badan oo ka mid ah qunsuliyadaha ku yaal Istanbul waxay ku yaalliin dhismayaal xarrago leh oo xamuul ah oo soo taxnaa qarniyadii hore, markii ay safaarado u ahaan jireen Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, ka hor burburkeedii iyo u soo guuritaankii caasimadda ee Ankara ee jamhuuriyadii dhowaan la aasaasay. Xaqiiqda xiisaha leh ee ku saabsan iyaga ayaa ah in dhammaantood ay ku yaalliin aagga Beyoğlu marka laga reebo hal, qunsuliyadda Iiraan, maadaama mas'uuliyiinta boqortooyadu u oggolaan waayeen wakiillo ka socda dhulalka aan muslimiinta ahayn inay saldhig ka dhigtaan xudduudaha rasmiga ah ee magaalada waqtigaas, taas oo ka badan ama ka yar u dhiganta jasiiradda Old City.
Austria, Köybaşı Caddesi 46, Yeniköy,.
Brazil, Askeroğacı Caddesi, 6 - Süzer Plaza dabaqa 4-aad - Elmadağ, Şişli,.
Canada, Ikstiklal Caddesi 189/5, Beyoğlu,.
Shiinaha, Axii Çelebi CD. Çobançeşme Sk. 4, Tarabya,, fax: +90 212 299-26-33.
Denmark, Trump Towers Büyükdere Cad. Maya: 1, Kule 2 Daire 463,.
Finland, Cumhuriyet Caddesi 71, dabaqa 8aad, Elmadağ,.
France, Ikstiklal Caddesi 4, Beyoğlu-Taksim,.
Germany, İnönü Caddesi 10, Gümüşsuyu-Taksim,.
Greece, Turnacıbaşı Sokak 22, Beyoğlu,, fax: +90 212 252-13-65.
Hindiya, Cumhuriyet Caddesi 18, Dörtler Apt. Dabaqa 7aad, Elmadağ,.
Iiraan, Ankara Caddesi 1, Cağaloğlu,.
Italy, Tomtom Kaptan Sokak 5, Beyoğlu,.
Japan, Büyükdere Caddesi 209, Tekfen Tower 10aad, 4,.
Republic of Korea, Piyalepaşa Bulv. 73, Ortadoğu Plaza, dabaqa 18aad, Okmeydanı,.
Netherlands, Ikstiklal Caddesi 197, Beyoğlu,.
Waqooyiga Makedoniya, Inönü Caddesi. Aler ku habboon 20/5 Gumussuyu / Taksim,, fax: +90 212 293-77-65.
Pakistan, Cengiz Topal Cad. Gülşen Sok. Maya: 5, Beyaz Ev 3. Etiler,.
Poland, Giz 2000 Plaza, Ayazağa Köyü Yolu No: 7, K. 5, Maslak,, fax: +90 212 290-66-32.
Russia, Ikstiklal Caddesi 443, Beyoğlu,.
Iswidhan, Ikstiklal Caddesi 247, Beyoğlu,.
Switzerland, Büyükdere Caddesi 173, 1.Levent Plaza A-Blok dabaqa 3aad, Levent,.
Suuriya, Maçka Caddesi 59/3, Teşvikiye,.
Boqortooyada Ingiriiska, Meşrutiyet Caddesi 34, Tepebaşı-Beyoğlu,.
United States, Inyestinye Mahallesi, Kaplıcalar Mevkii No.2, İstinye,.
Bedka uu ku yaal Yurubta Yurub dhanka galbeed ee Istanbul waxaa loo yaqaan Thrace. Waxay leedahay magaalooyin badan oo taariikhi ah oo leh dhaxal ahaan Byzantine iyo Ottoman.
Edirne, oo laba saac u jirta waqooyi-galbeed, waa magaalo qurux badan oo taariikhi ah, waxayna ahayd caasimaddii Cusmaaniyiinta ka hor intaan awoodda loo wareegin Istanbul. Waxaad ubaahantahay uguyaraan hal maalin halkan. Waddo muuqaal dabiici ah oo gaabis ah ayaa woqooyiga u marta Kiyikoy, Medea qadiim ah, tuulo kalluumeysato ah oo ku taal Badda Madow oo leh qaab dhismeed dhaqameed, qeyb ahaan dib loo dhisay derbiyadii magaalada ee qadiimiga ahaa iyo monastery weyn oo u dhow. Magaalada ku xigta wadadaas waa Vize, oo ah magaalo duug ah oo leh cathedral Byzantine oo sifiican loo ilaaliyay.
U soco Galbeedka Yurub adoo sii maraya Sofia ee Bulgaria ama Bucharest ee Romania.
Jasiiradaha Marmara waxay kaabiga ku hayaan badda, aad ayeyna uga fog yihiin uguna magaalooyin yar yihiin Jasiiradaha Princes ee ku yaal xeebta magaalada.
Bursa ilaa koonfur-bari waa caasimad hore ee Cusmaaniyiinta oo leh aragtiyo taariikhi ah oo badan oo lagu daray Uludağ National Park oo kaliya koonfurta. Iznik, oo hodan ku ah Byzantine, Seljuk, iyo dhaxalkii hore ee Cusmaaniyiinta, ayaa u qalma in loo leexdo jidka.
Waddo muuqaal ah oo loo maro Izmir ayaa ah in loo aado galbeed kadibna koonfur loo maro gacanka Gallipoli, oo leh goobaheeda Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, laga soo gudbo Dardanelles ilaa Çanakkale, ka dibna laga gudbo Troy iyo Pergamon (Bergama). Gawaarida gaagaaban ee gaaban waxay kuu keeneysaa jasiiradda soo jiidashada leh ee Bozcaada.
Istambuul waxaad kaliya ka gudubtay marinka Aasiya Turkiga. Ku sii soco bariga guud ahaan Anatolia si aad u badan: dib u cusbooneysiiyay Ankara, si aan munaasab ahayn Cappadocia, surreal Mount Nemrut, Kars fog. Iyo weliba weli sii wadida dalalkii hore ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta: raac raadka ganacsatadii hore, socotadii qarniyadii dhexe, xajka, iyo hippi.
Hoteelka Adamar Istanbul
Dhammaan Xilliyada Hotel Istanbul
Amber Suites Hotel Istanbul
Hoteelka Magaalada Arden City Istanbul
Hoteelka Armada Istanbul Pera
Hoteelka Art City Hotel Istanbul
Hotel Ascot Buyukada Istanbul
Aasiya City Hotel Istambuul
Hoteelka Avantgarde Istanbul
Hoteelka Avicenna Istanbul
Hoteelka Galbeedka Amber ee ugu Fiican Istanbul
Hoteelka Galbeedka Antea Palace ee ugufiican & Isbaanish Istanbul
Hoteelka Galbeedka Citadel ee ugu Fiican Istanbul
Hoteelka Galbeedka Boqortooyada ee ugu Fiican Istanbul
Hoteelka Galbeedka Eresin Taxim ee ugu Fiican Istanbul
Best Western Plus Madaxweynaha Hotel Istanbul
Suugaanta Galbeedka Premier Acropol ugu Fiican & Hoteelka Hoteelka Istambul
Meelaha ugu Fiican Premier Regency & Spa Istanbul
Best Galbeed Premier Senator Hotel Istanbul
Premier Galbeedka Ugu Fiican Guryaha Guryaha & Hoteelka Istabul Istanbul
Huteellada Sile Gardens ee ugu Fiican Istanbul
Ugu Fiican Galbeedka Tashan Ganacsi & Gagada Diyaaradaha ee Istanbul
Degganaanshaha Byotell Flora Residence Istanbul
Hoteelka Byotell Istanbul
Barxadda By Hotel Madaarka Caalamiga ah ee Marriott Istanbul
Crowne Plaza Hotel Istanbul - Aasiya
Crowne Plaza Hotel Istanbul-Magaalada Old
Hotelka Darkhill Istanbul
Hoteelka Divan City Istanbul
Hoteelka Divan Istanbul
Hoteelka Divan Istanbul Asia
Hoteelka Divas Istanbul
Double Tree By Hilton Hotel Istanbul - Town Old
DoubleTree Waxaa qoray Hilton Hotel Istanbul Moda
Hoteelka Elite World Istanbul
Hoteelka Erguvan Istanbul
Hoteelka Esans Hotel Gaarka ah ee Istanbul
Hoteelka Eser Premium Iyo Spa Istanbul
Faatix Resadiye Hotel Istanbul
Afarta xilli ee Hotel Istambul At Sultanahmet
Afarta xilli ee Hotel Istambul ee Bosphorus
Guryaha Fraser Place Anthill Istanbul
Deganaanshaha Galateia Istanbul
Huteelka Beerta Dhismaha ee Istanbul
Huteelka Grand Hyatt Istanbul
Hoteelka Historia Istanbul
Hoteelka Dalxiis ee Dalxiis ee Istambul
Holiday Inn Istanbul Magaalada
Hoteelka Bulvar Palas Istanbul
Hotel Daarusade Istanbul
Hoteel Deniz Guryo Istambul ah
Hoteelka Erboy Istanbul
Hoteelka Momento Istanbul
Hoteelka Niles Istanbul
Hoteelka Sari Konak Istanbul
Hoteelka Vicenza Istanbul
Hotelka Inter Istanbul
Huteelka Istanbul Golden City
Hoteelka Istanbul Gonen
Hoteelka Dalxiiska ee Istaanbuul
Hoteelka Istanbul Inn
Hotel Istanbul Marriott Hotel Aasiya
Hoteelka Kupeli Istanbul
Hoteelka Halyeeyga Istanbul
Hotel Lush Taksim
Hoteelka Marmaray Istanbul
Huteelka Merial Istanbul
Suugaanta Misafir 8 Hotel Istanbul
New House Hotel Istambuul
Cismaanhan Hotel Istanbul
Hoteelka Ottoman Park Istanbul
Hoteelka Boqortooyada Ottoman Taksim Square
Hoteelka Park Hyatt Istanbul Macka Palas
Hoteelka Park Savur Istanbul
Hoteelka Dheeriga ah ee Istanbul
Huteelka Prestige Istanbul
Shirka Radisson Blu & Airport Hotel Istanbul
Radisson Blu Hotel Istanbul Aasiya
Ramada Istanbul Hotel Asia
Hoteelka Recital Sultanahmet
Hoteelka Renaissance Istanbul Bosphorus
Hoteelka Renaissance Polat Istanbul
Hoteelka Richmond Istanbul
Hotel Saba ee Istanbul
Hoteelka Sarnic Istanbul
Hoteelka Sarnic Premier Istanbul
Masjidka Sheraton Istanbul
Hotelka Sirkeci Konak Istanbul
Hoteelka Sirkeci Park
Hotelka Sultan Palace ee Istanbul
Suldaan Saba Hotel Istanbul
Sultanahmet Hotel Artefes Istanbul
Deganaanshaha Taksim Istanbul Inn
Hoteelka Byzantium & Suites Istanbul
Guriga Hoteelka Bosphorus
The Hotel Hotel Nisantasi
Hoteelka Istanbul Edition
Hoteelka Marmara Sisli ee Istanbul
Hotelka Q-Inn Old City Istanbul
Hotel Valide Hotel Istanbul
Hoteelka Zagreb Istanbul
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Turkiga > Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Istanbul
Tulip Dahab ah Arnhem - Doorwerth	   
Samedan Swiss Xalaal Hagaha Socdaalka